ချိန်းတွေ့ဆိုက် - ဗီဒီယိုက ချက်တင် ဖိလစ်ပိုင်
ဗီဒီယိုက ချက်တင် ဖိလစ်ပိုင်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်၊ချစ်ကြည်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ဆက်ဆံရေး၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ကျပန်း၊ခရီးမိတ်ဖက်၊ကလောင်ပဲ၊စကားပြော။ ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်၊ချစ်ကြည်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ဆက်ဆံရေး၊ကျပန်း၊ခရီးမိတ်ဖက်၊ကလောင်ပဲ၊စကားပြောချိန်းတွေ့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးက၊ချိန်းတွေ့၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၊မိသားစုနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ နေ့တိုင်းအသစ်အမျိုးသမီး။ ချိန်းတွေ့၊အမျိုးသမီးများ၊ချက်တင်၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊သတို့သမီးချိန်းတွေ့၊သတို့သမီး၊ချက်တင်၊အချစ်ဇာတ်လမ်း၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူ ၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မြို့၏သတို့သမီး
ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းစကားပြောသုံးဖိလစ်ပိုင်၊အင်္ဂလိပ်၊စပိန်ဒါမှမဟုတ်တရုတ်။ ဗီဒီယိုစကားပြောလူတစ်ဦး၏မည်သည့်နိုင်ငံသားချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်း တွင်သူတို့၏ဇာတိဘာသာသုံးပါဠိ။ သဘာဝအခြေအနေအထောက်အကူဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသ-စက္မႈပြည်နယ်၊အဓိကအ၏ငှက်ပျောသီး၊လာျ၊ဆန်အတွက်ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအများစု။ ဖိလစ်ပိုင်စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲနိမိတ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်အပေါ်အဓိကအကြောင်းအများ၏ချစ်ကြည်ရင်း၊ပရော၊အနားယူ။ ပြီးနောက်စကားပြော ချက်တင်နှင့်အတူဖိလစ္ပိုင္၊သင်တို့သည်သိမည်အကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုတွင်တည်ရှိပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ကိုယ်စားပြုများ၏ကွင်းဆက် ဖုိေ။ ဤထူးခြားသောနိုင်ငံတစ်ခုနှင့်အတူမရိန်းမိုးဥတု။ မည်သည့်အချိန်တွင်အမ်ဳိးအစားအပူချိန်အောက်တွင်မကျပါဘူး၊ဒါကြောင့်သင်မကြာခဏတွေ့ဆုံရန်သူလူချက်တင်၏အရိပ်၌စွန်ပလွံပင်၊ပုန်းအောင်းနေလောင်နေ။ အဆိုပါသူဌေးလူသတ္တဝါနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊အပူပိုင်းသစ်တောများ၊လှပသောကမ်းခြေနှင့်ညားတောင်ဆွဲဆောင်ခရီးသွားရောက်ရန်။ ပင်မစီမံကိန်းထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးခရီးစဉ်၊ကိုယ့်မှာကြည့်ချက်တင်ကစားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊နှင့်လည်းသင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲ။ အတွက်အခမဲ့ချက်တင်ဖိလစ်ပိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေဖိလစ်ပိုင်မြို့ကဲ့သို့သောအဖြစ် မြို့၊မနီလာ၊ မြို့၊နီလာ၊၊ဘူ။ မနေသင့်အချိန်ဖြုန်း၊ပူးပေါင်းအသက်ရှင်သောချက်တင်အခုအချိန်မှာ။ သင်ယူခြင်းပျော်မွေ့ခံစားက်ပ္တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။
ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ အုပ်စု-ဗီဒီယိုချက်တင်လိမ့်မည်အကြောင်းကြားအားလုံး၏သတင်းနှင့် ။ ကြားဖူးတယ်အကယ်၍နိုင်ငံခြား စီမံကိန်းကဲ့သို့ သို့မဟုတ်လျှင်သင်သည်ပင်ကြိုးစားခဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၊ထို့နောက်ဧကန်အမှန်အသင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အကမ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်-ဤတစ်ဖြစ်ပါသည်အလွန်ကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာနိုင်ငံခြားတူသော၊ဒါပေမယ့်စွမ်းရည်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတူရုရှားပီ၊အများအားဖြင့်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နယ်မြေအတွက်ရုရှားနှင့်ထိုနိုင်ငံများရှိ၏။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတစ်ယောက်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏အားဖြင့်အသုံးပြုဘျနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့မှာပါ။ အဓိကကွာခြားချက်အကြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်း ကနေအဲဒီနိုင်ငံခြားဆိုဒ်များသည်၊သင်တန်း၏၊အကြောင်းဆက်သွယ်ရေးမှာအများအားဖြင့်အပေါ်ရုရှားဘာသာစကား။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အမိန့်အရထုတ်ချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်း၊သင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်မှတ်ပုံတင်ပြီးရိုက်ထည့်အစည်းများ၏သတင်းအချက်အသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ ကိုယ့်သွားဖို့ဗီဒီယိုချက်တင်၊နှိပ်ပါ"စတင်ရှာ"နှင့်အမည်ကျပန်းကောက်မိတ်ဆွေတစ်ဦး၊သင်သာရှိသည်ဖို့စတင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူသူ့ကိုသို့မဟုတ်ဆက်လက်ရှာ။ အားလုံးမယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းပြီး၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော် တစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့အဆင်ပြေစေရန်။ ထို့အပြင်မှ အလိုဆန္ဒဝယ်ယူရန်အတွေ့အကြုံသစ်၊နှင့်အသေးစားအဖြစ်အပျက်အတွက်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခမဲ့အွန်လိုင်း၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:ဤသည်အနည်းဆုံးလိုအပ်ဆန္းစတင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့။ အများစုဟာသင်ပြုလိုအပ်မည်သည့်မှတ်ပုံတင်၊ငွေပေးချေမှု၊အကောင့်များ၊စသည်တို့ကို။၊ ဒါပေမယ့်ကိုသာအတွက်အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များနှင့်အလိုဆန္ဒမှဆက်သွယ်ပြောဆို။ အောင်မြင်ရန်ချင်တယ်ဆိုရင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုံးဝအခမဲ့ကြောင့်၊အွန်လိုင်းရုရှားကစားတဲ့စကားပြောခြင်းများပါဝင်သည်။ နှင့်အောက်မေ့သတိရသောအဖြစ်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်အကျိုးစီးပွားအတွက်သင်အဖြစ် ၊ဒါကြောင့်အသင့်လျော်စွာပြုမူ။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့၊အခမဲ့ခံစားရသွားဝန်ဆောင်မှုနှင့်စတင်စကားပြော၊ဒါပေမယ့်မေ့မလြော့ပေါ်မှာငါတို့တယ်များမှာအစဉ်အလာစည်းကမ်းအကျင့်၊ထို့ကြောင့်သင့်မပြဘဲရိုင်းစိုင်းသို့မဟုတ်ပူဇော် မျိုး၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်အပြစ်အားဖြင့်အိပ္ခ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူလူတွေတစ်လျှောက်လုံးကရုရှား။ လာပြီးသင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မိန်းကလေးများကိုလာရောက်လည်ပတ်ချက်တင်ကစားတဲ့ရှစ်အပေါင်းအတွက်ရုရှားနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကောင်လေး၏စိတ်ကူးခဲ့ပြီးအပြုသဘောအဘို့အသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်း၊ထို့ကြောင့်၊လျှင်သင်ကြည့်လိုသူမဖွယ်ရှိကုန်လိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံ၏။ ကြောက်ချဉ်းကပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်သူ့ကိုမသိရ။ ဖတ္ခ်က္ေဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း"ဝဘ်ကစားတဲ့"၊အရာအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ်။ အွန်လိုင်းကစားတဲ့ဝဘ်ကင္မရာ-အသစ်နှင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာအတွေ့အကြုံ။ ကြိုးစား။ ခရီးသွားလာဖို့ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ၊တွေ့ဆုံရန်လူများ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ၊ဆက်ဆံရေးရှိသည်၊သူငယ်ချင်းများပါစေ၊နှင့်ချစ်ခြင်းဤအအလွန်အသုံးဝင်နှင့်သိကောင်းစရာများ။ သို့သော်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအဖို့ကမ္ဘာတလွှားခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းရရှိနိုင်။ အများစုကအင်တာနက်အသုံးပြုသူအများကြီးကိုအခြားရွေးချယ်စရာအမကြာခဏငွေကုန်ကြေးကျနိုင်ငံခြားခရီးဝေးမှအစည်းအဝေးနှင့်အတူချိန်းတွေ့၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများကိုချက်တင်ကစားတဲ့။
ဗီဒီယိုချက်တင်-၊အကျင့်ကိုကျင့်အလွန်ရိုးရိုးဘဲနဲ့မလိုအပ်တဲ့ ။ေ ရှေးရိုးစွဲအတွက်ဒီချက်တင်ထားအင်္ဂါရပ်အားလုံး၏ပထမဦးဆုံး။ အဲလွယ်ကူဘာမှမ၊အထက်သို့သွားရန်စာမျက်နှာဖွင့်ကမ်နှိပ်ပါစတင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဤလွယ်ကူသောအဆင့်များကိုပေးမည်သင်ပျော်စရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါသည်၊အရာအတွက်သာဖြစ်နိုင်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊အဖွဲ့နိယာမအပေါ်၊သင်ချက်ချင်းပျော်မွေ့။ တကယ်တော့၊ဤအမူထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အပေါ်လင့်၏။ အသင်းသည်အစဉ်အမြဲကြိုးစားနေစာရင်းထည့်ရန်လူကြိုက်များဗီဒီယိုချက်တင်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုနှင့်ဗီဒီယိုစာတိုပေးပို့။ မအောင်မြင်တော့အချိန်အများကြီးအဖြစ်ဗီဒီယိုချက်တင်ဖြန့်ချိဗားရှင်းသစ်ပါဝင်သောသစ်ဖစ္ပါတယ္။ ၏သင်တန်း၊အပိုဆောင်းအင်္ဂါဗီဒီယိုချက်တင်အမြဲဓမ္မအသုံးပြုသူများမှ။ စဉ်းစားအဘယ်အရာကိုမျိုးကိုတိုးတက်မှု၏ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်:ဒါ့အပြင်၊ဒီဗီဒီယိုချက်တင်သည့်ဒီဇိုင်း၊နှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့အသုံးပွုဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအလိုလိုနားလည်ဖို့ဘယ်လိုစတင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအဖော်နှင့်မည်သို့ရှာတွေ့မှညာဘက်ကိုလူတစ်ဦး စကားလက်ဆုံကြကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်။ ခြော၊ဒီဗီဒီယိုချက်တင်၊အရာအဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ကမ်းလှမ်း၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားလုံးအကောင်းဆုံးအဘို့အပိုပြီးသာယာသောစကားပြောဆိုမှုထိုအကောင်းတစ်ဦးအချိန်။ သင်အတည်ပြုနိုင်မည်။ဒီမှာအနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံ။ အများစုကကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏တွေ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုနှင့်ဤအက္ပ္ကိုအတော်လေးတက်ကြွသောအားဖြင့်သက်သေပြသကဲ့သို့၊ကောင်းတက်ရောက်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအရာအခမဲ့အာရှချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနှင့်ရှာအွန်လိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အရေးယူဖို့ကြိုးစား။ များစွာသောတစ်ဦးတစ်ဖိလစ်ပိုင်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့များအတွက်ဖိလစ်တစ်ဦးတစ်ဖြည့်ဆည်းမှာအာရှချိန်းတွေ့။ ဒီနိုင်ငံအများအပြားရှိပါတယ်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများရုံသင်တို့ကဲ့သို့ရှာကြံကြမေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ချစ်ကြည်ရေး၊ဆက်ဆံရေးဟာအိမ်ထောင်။ ရှာဖွေနေနေ့စွဲများအတွက်၊ရည်းစား၊အချစ်နှင့်အတူအခမဲ့အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုမှုလွယ်ကူအဆင်ပြေ။ ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်မယ်နှင့်အတွေ့အပြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုမိနစ်တစ်ဦးအမှု၌။အာရှနေ့စွဲအသားတင်အမတ၏အမိန့်သတို့သမီးဒါမှမဟုတ်ခင်ပွန်း၏။လူမျိုးအပေါင်းတို့အတွက်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကို။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူရုပ်ပုံများသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာသို့မဟုတ်နိုင်ငံရပ်ခြား။ သင်သည်လည်းရှာတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနိုင်ငံခြားအမျိုးသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ဦးခ်င္းဆိုဒ်ဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ အာရှချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုသင်ကူညီမှမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်၊ဘောကန်၊အချစ်နှင့်ပင်အသက်ထောင်ဖက်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်။ လက်ဝဲဘက်အပေါ်၊မြို့၌ဖိလစ်ပိုင်သို့မဟုတ်အနီးအနားမှာသင်နှိပ်နိုင်သည်အပေါ်မည်သည့်မြို့ကိုကြည့်ရှုဖို့တစ်ဦးတစ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့တော့ကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးပို့စ်လစ်စလစ်ပုံများ။ အများအပြားရှိပါတယ်ကင္ယာတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများဓာတ်ပုံများကိုတော့အရေးယူဖို့သင်၏သိသာထင်ရှားသောအခြားနေ့။ အကောင်းကံနှင့်နေ့ဖြစ်ပါစေ။.
မင့်ခြင်းအကြောင်းလိင်သို့မဟုတ်ပျင်းရတဲ့အ ၊ဒါပေမယ့်အများကြီးနိုင်ငံခြားသားဒီရက်ပဲကြိုးစားချင်ထွက်လိင်နှင့်အတူ ။ နှင့်ဖိလစ်ပိုင်ကြသည်နှင့်အတူ၊ထိုင်းနိုင်ငံတွင်၊အကောင်းဆုံးနေရာသွားဖို့အကြောင်းဒီအကြောင်းမင့်ရုံမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်ကြောင့်သူတို့ကို၏၊ဒါပေမယ့်လည်းကြောင့်အတော်လေးစျေးပေါဒီလိင် ဟုတ်မှန်လာ။ ထိုမှတပါး၊သံသယမရှိကြောင်းအများကြီး ပိဳင္သြားဖြစ်ကြောင်းယုံဆွဲဆောင်မှုဒါကြောင့်တခါတလေစဉ်းစားသောအခါသူမသည်လွန်းလှတဲ့မိန်းကလေးကိုတော့စေခြင်းငှါပင်အမှု။ ဘူကသံသယမပါဘဲအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာတွေ့ဆုံဖို့စပ္နံေသာဖိလစ်ပိုင်ကြောင့်ပဲရှိပါတယ် အရည္အေသြးျမဆိုးဆိုးနည်းလမ်းများတွင်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရဲ့အရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ဖြုန်းနိုင်အမွန်းလွဲပိုင်း ပတ်ပတ်လည်နှင့်ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းမှာ ကုန်တိုက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦး"ပုံမှန်"တွေ့သောသူသင်ရုံအဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားအဖြစ်ခံစားရကြောင်းသူမနှင့်မဟုတ်ဘူးမေးများအတွက်ပိုက်ဆံရဖို့အနည်းငယ်ယုတ်ပြန်သင့်ရဲ့အခန်း၌။ ဒါပေမယ့်နောက်တန်း၏သင်ကအစများ၏ကြီးမားသောအရေ ပိဳင္သြားသူမကြာခဏတူညီသောတွေကနေရာအများအပြားအလုပ်လုပ်ကိုင်အဖြစ်အလွတ်သောသူမေးလိမ့်မည်များအတွက်အချို့ပိုက်ဆံများအတွက်"အတူသွားတယ်"ဒါပေမယ့်လည်းအမှန်တကယ်ဘယ်လိုသိရန်ကျေးဇူးပြု။ အဲသာကြောင့်သူတို့သည်"အဘယ်သို့သိစေလို"ဒါပေမယ့်လည်းရိုးရိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေအများကြီးအတွေ့အကြုံအတွက်ကြောင့်လုပ်နေတယ်။ အောက်ငါးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြည့်ဆည်းဖို့စပ္နံေသာဘူ။ သုံးသူတို့ကိုပေးဆောင်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အခြားနှစ်ခုခွင့်ပြုမှတွေ့ဆုံရန်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းအဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူအခမဲ့၊အထူးသဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အကြီးအကျယ်ရေပန်းစားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမဆက်ကပ်အပ်နှံ ဘားဘူဆိုရင်တစ်ခုခု အပြောင်းအလဲအနာဂတ်မှာ၊ငါပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်မှထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ ငါအတော်လေးထူးဆန်းစတင်ထွက်ဤကဲ့သို့သော၊ဒါပေမယ့်ငါခန့်မှန်းယောက်ျားတွေအများစုကထင်လိမ့်မယ်အဆိုပါစံလမ်းသွားအကြောင်းအစည်းအဝေး ဒီမြို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ဘား။ သို့သော်အမှန်တရားအကြောင်းရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရက်ဆိုင်များအတွက်မြို့(ဒီဖြစ်ကောင်းအနာဂတ်၌ပြောင်းလဲသွားသောအဖြစ်ဝယ်လိုအားမှနိုင်ငံခြားသွားတက်)နှင့်ပင်ပုံမှန်အားကစားအရက်ဆိုင်ဘူးခွင့်ပြုပိဳင္သြားရိုက်ထည့်ရန်၊အများအားဖြင့်ရှောင်ရှားရန်ပဋိပက္ခများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ။ အဆိုပါရလဒ်ဤမူဝါဒ၏အကြောင်းသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အများကြီးလွတ်ညာဘက်အပြင်ဘက်မှာအဖျော်ယမကာနှင့်အပေါ်ရက်(အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။ ဤသည်သာအလမ်းအတူတက်ချိတ်စပ္နံေသာဘူငါမှာမဟုတ်ဘူးတကယ့်အကြံပြုပါသည်။ အများကြီးရှိပါတယ်လမ္း တွေ့ရှိခံရဖို့ညစဉ်ညတိုင်းတွင်ရက်ထပ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်။ သို့သော်၊ကျွန်မသူတို့ကိုအနည်းငယ်ကြောက်စရာရိုးသားဖို့သူတို့များသောအားဖြင့်မဟုတ်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုအားလုံးမှာလည်းတွန်းအားတွေအများကြီးပိုခက်ရောင်းဖို့သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ သူတို့ကပင်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏လက်ကိုသို့မဟုတ်ကိုင် တံခါး၏အတက္ကပြော"ကိုယ့်စက်မှာငါ့နေရာကိုယခု"(ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်တာနဲ့)။ ဒီလိုမျိုးအပြုအမူအလွန်ကွဲပြားခြားနားအများဆုံးအခြားအမျိုးအဘူစစ္မွန္တဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီတော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကနေကွယ်ပျောက်နေဖို့အလမ္း သို့မဟုတ်သူတို့ကိုအသုံးချအပေါ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှု။ အလားတူအဆိုပါအရက်ဆိုင်၊အများဆုံးညဥ့်ကလပ်အသင်းအတွက်ဘူချင်ကြပါဘူးပိဳင္သြားဒါပေမယ့်နာမည်ကြီးခြွင်းချက်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်စူပါကလပ်အရာဖြစ်ရုံမကအကောင်းဆုံးနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အပူ မိန်းကလေးများဒါပေမယ့်လည်းမှန်မှန်ဆွဲဆောင်၏အချို့အပူဆုံးပိဳင္သြားသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအရမ်းအထွက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲလည်းတွန်းအားပေးတဲ့အမှုတွေအများကြီးနဲ့ ။ ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသည်၊မျက်လုံးချင်းဖြစ်စေခြင်းငှါသူတို့နှင့်အတူ၊သူတို့အပြုံးနဲ့စကားစတင်။ အားသာချက်အစည်းအဝေး၏ပိဳင္သြားအတွက်ကလပ်အကြောင်းကိုသင်ကခုန်နိုင်ပါသည်သူတို့နှင့်အတူအနည်းငယ်နှင့်တကယ့်ထုတ်စစ်ဆေးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေမီအောင်တက်သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချင်လျှင်သင်သွား။ အခြားနေရာတွေကအကြောင်းပွင်ဘို့မျှားတက်နှင့်အတူ ဖြစ်လိမ့်မယ်မိုကျန်ဘားသော အတွင်းလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးကနေအသက်ရှင်နေထိုင်(ပံုကိုၾကည့္ပါ)နှင့်အမျိုးအစားများ၏တစ်ဦးရောနှောဆောက်အဦးအပြင်ဘားတန်းနှင့်ညဥ့်ကလပ်။ အဲရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှားအမျိုး၏နေရာအရပ်ဖြစ်သော်လည်းအပေါ်အချို့သောညသငျသညျကံကောင်းရစေခြင်းငှါရှာတွေ့အနည်းငယ်ပိဳင္သြားထွက်ဆွဲထားအတွက်အုပ်စု၊ထမင်းစားခန်းနှင့်သောက်သုံးနေစဉ်အတွင်အခြားအညဒါဟာတကယ်ကိုဆိတ်ငြိမ်။ ထိုအခါမူကားသင်အမြဲရွေးချယ်စရာရှိသည်ဖို့လမ်းလျှောက်ကျော်အသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းကြိုးစားမှု၏အခြားနည်းလမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသောဤဆောင်းပါး။ သင်ကအံ့သြပါလိမ့်မယ်အားဖြင့်အရည်အသွေးကိုမခ်စ္လိုသင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ဈေးဝယ်။ အထူးသဖြင့် ကုန်တိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများတစ်လူကြိုက်များအလှန်အစက်အပြောက်အဘို့ထိုသူတို့နှင့်အချို့ဤမျှလောက်ပူချင်ပါတယ်လို့ပိုကောင်းဝတ်ဆင်တ္အစား၏အစက်အပြောက်အဘီအခါရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ ။ အကောင်းဆုံးနေရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန် စပ္နံေသာ အခန္းရဲ့ကော်ဖီအပေါ်ဒုတိယထပ္(ပုံ)သည်အလှဆုံးအစက်အပြောက်အတွက်မြေတပြင်လုံးအဆောက်အဦး၊အရံဥယျာဉ်နှင့်အစိမ်း။ နောက်တစ်နည်း၊သင်ဖြစ်နိုင်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်အခြားပပါလိုပဲ မြို့တော်ဘူသို့မဟုတ်အသစ်နှင့်စူပါခေတ် ကမ်းခြေနေရာမခဲယဉ်းဆိုတာတွေ့ရဖို့တစ် ဒီမှာရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သင်စဉ်းစားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားပိဳင္သြားအတွက်စားသောက်ဆိုင်၊အရက်ဆိုင်နှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ဘူ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကအများစုကလည်းအရှက်မြင်စေနှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်၊သူတို့ဘာအစားပြုသည်သူတို့အပေါ်ကိုတက်မှတ်ပုံတင် ချစ်သောလူကြိုက်အများဆုံး ချိန်းတွေ့ဆိုက်မဟုတ်-ကိုယ့်အတွက်ဘူဒါပေမယ့်အားလုံးအနှံ့။ ပြီးတော့သူတို့စီစဉ်ကို"ရုပ်ရှင်ကြည့်"သို့မဟုတ်တူတစ်ခုခုအချိန်မှာအဲဒီအတွက်သူတို့ရဲ့အခန်း။ သင်မြင်များအားလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းသွားနိုင်ဖို့အစည်းအဝေးနှင့်အိပ်ပျော်နှင့်အတူစပ္နံေသာဘူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ။ နေစဉ်သင်မုချတွေ့အချို့ကိုဆုံး အတွက်ညဥ့်အခါကလပ်အသင်း၊အထူးသဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်၊ဒါကြောင့်အတော်လေးအချိန်စားသုံးနှင့်ရှိနေပါတယ်ကိုယ့်လူတိုင်းမရဲ့။ သွားများအတွက်ကုန်တိုက်အလွတ်ပေးနိုင်တဲ့အလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးအဘို့အ ပိုက်ဆံပေး၏ဆွဲဆောင်မှုကိုအအာင္လႈိင္၊ဒါပေမယ့်စေခြင်းငှါအရှက်ခံရဖို့သင်တို့အဘို့မြင်နှင့်အတူသူမ၏အလယ်၌။ ဤမည် ကွဲပြားခြားနားကောက်လျှင်အလမ္းဟွတ်မှာညဉ့်၊ထိုအခါမူကားမိမိတို့အရည်အသွေးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားရွေးစရာ။ ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်ဖြုန်းမိနစ်နှစ်ဆယ်မှတက်လက်မှတ်ထိုးမှာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအချို့အမှုအရှိဆုံးဘူစပ္နံေသာအခမဲ့အဘို့၊ဒါပေမယ့်လည်းစီစဉ်တက်တွေ့ဆုံရန်ရန်အမှန်မှာသင့်နေရာအစားဖြစ်ခြင်း၏အမြင်အတွက်အတူတကွ။ ကောင်းပြီငါရှိမှကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့သင်အကြင်သူသည်။။။။။ သင့်နာယကသို့မဟုတ်လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ငါသည်အဝမ်းမြောက်စွာလှူဒါန်းရန်။ ကြ်န္ေတာ္ကသင့်ရဲ့လမ်းညွှန်နှင့်အကျိုးရလဒ်များထွက်၏ဤလောကအနည်းဆုံးပြော။
ဤသည်အခြားပို့စ်ကျမ်းစာအားဖြင့်ငါ့ ။ ငါသိစေခြင်းငှါလက်တင်အမေရိကထက်ပိုကောင်းပြီး၊ငါ၏အအသိပညာ၏အာရှလာျကြောင်းအမှတ်ရခဲ့ကြသူတွေအများကြီးရတဲ့အရေးယူကျော်ရှိပါတယ်။ ရရှိရန်အပေါ်ဖတ်အချို့သောကြီးမြတ်အကြံဥာဏ်။ လူအဖြစ်ရှိခဲ့ခဲ့သူအဖိလစ်ပိုင်နှင့်ပျော်မွေ့အစည်းအဝေးတွင်ပုလဲအထူးေနိုင်ငံ၊ဆိုနိုင်ရန်လုံလောက်သောမယ်ရမိတ်ဆက်မှတစ်ခုနှင့်မျှော်လင့်ကောင်းတစ်ဦးရလဒ်။ ရှိပါတယ်အချို့သောအမှုအခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းစဉ်းစားအဖြစ်၊ ကောင်းစွာအဖြစ်အချို့သောအကြံပေးချက်များသင်ကူညီလိမ့်မည်တို့၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်လျှင်၊သင်အသုံးပြုအချို့ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာလှည့်ကွက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါဟာနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်လို့မရရမိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ တဦးတည်းအတွက်၊သင်ရှာဖွေပေါင်းသင်းတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အတိုအနေအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ပိုပြီးလေးနက်သောအမျိုးအစားဆက်ဆံရေး။ အများကြီးပုံပြင်များရှိသည်ပြူးအမျိုးသားတစ်ဝှမ်းမြင်စွာရှာဖွေအံ့သြဖွယ်မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ အများကြီးရှိပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်တစ်မိန်းကလေး။ ထက်အခြားဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့အရူးလှ၏အချို့သောအကြောင်းပြချက်များမှာရှိစဉ်အခါကြီးမားသောအရေအတွက်၏မိန်းကလေးများ အပေါ်ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊အဖွဲ့အစည်းများ၏အလံ၊ဒီအခြေအတော်လေးနည်း။ ဖိလစ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊နေခြင်းအားအနောက်နိုင်ငံများ၊အဆဲအခြေခံအားဖြင့်ရှေးရိုးစွဲ။ အမျိုးသမီးအတွက်ယုံကြည်ဆက်ဆံရေးကို၊မေတ္တာကိုရှာဖွေခြင်း၊ဖြစ်လာကောင်းတစ်ဦးဇနီးသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ ဤသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင် ရှာဖွေနေများအတွက်လေးနက်သောအမျိုးအစားများ။ ဤအမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအဆုံးအတိုင်းအတာ၏၊သော်လည်း။ သို့သော်၊သင်အမှန်တကယ်ရှာတွေ့ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးလည်းရှာဖွေနေများအတွက်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး။ ဤသူအများစုဟာအမျိုးသမီးကွာအဝေးကနေနှစ်ဆယ်သုံးဆယ်မှအသက်အနှစ်။ ဤသင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်အပေါင်းသင်းဖြစ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလှအပ၊လူငယ်များနှင့်အပျနှံမှုနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ယေဘုယျအနေဖြင့်၊ အမျိုးသမီးတွေဟာအရမ်းပျော်စရာဖြစ်။ သူတို့ဟာရယ်မောနိုင်မှာပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့ရီစရာဟာသနှင့်ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ပေမယ့်။ ကြိမ်မှာ၊သင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အတူဝမ်းမြောက်သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာနေစဉ်၊အခြားအချိန်များတွင်၊သင်စေခြင်းငှါစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာမိမိတို့ အတွက်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း။ ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်ပုံရသောကြောင့်ဤအမျိုးသမီးအားအတက်ဖို့ပြုမူနှင့်အတူကောင်းမွန်သောအပြုအမူဖြစ်ခြင်း၊သင့်လျော်သောအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ အဘို့အတွက်ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်မျှော်လင့်တဲ့'ဇ'အဘို့ရှာကြသည်လျှင်။ သင်အိမ်ပြန်လာဖို့အတင္းဖြစ်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်နှင့်အတူနွေးထွေးသောအပြုံးပြီးနောက်အိမ်ပြန်မှအလုပ်လုပ်ပြီးကောင်းတဲ့အစားအစာနေ့ရက်တိုင်း။ အခြေခံအားဖြင့်၊သင်နိုင် မျှော်လင့်ကောင်းတစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်သင်၏အိမ်သူအိမ်။ အတွက်ပိုလန်ယဉ်ကျေးမှု၊မိသားစုအပေးအစားေထက္အားလုံးထက်။ ထိုကွောငျ့၊သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်၏တစ်ဦးကောင်းမိသားစုလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်တူဆင်းအခြေချရန်တစ်မျိုးသမီး။ ဤသည်မှာသို့သော်မဆိုလိုပါဘူးကြောင်းဖြစ်ခြင်းခြုံငုံဉာဏအမျိုးအစားအမျိုးသမီးများ၊ရှိပါတယ်သော်လည်းတည်ရှိအချို့သောအထူးသဖြင့်သူတို့နထေိုငျသောသူအတွက်အကြီးမြို့။ သို့သော်၊ဒီအခြေခံအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းအရအမျိုးသမီးတစ်ဦးနိုင်သူအနည်းဆုံးသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို၊ဘာသာစကားတစ်ခုအတွက်သင်နားလည်နိုင်။ တကယ်တော့တဲ့ကိစ္စအဖြစ်၊ဒါကြောင့်အသုံးအကြံပေးအကြားအခြားယောက်ျားသူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်မလေးလေ့တက်ခူးဖို့သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုအလွန်မြန်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအပင်ရဲ့အရည်အသွေး အမျိုးသမီးမှကြွလာသောအခါလေ့လာနေပြီးသင်ယူ။ မဟုတ်ကယ့်ကိုလျှို့ဝှက်သောဖိလစ်ပိုင်တကယ့်ပရဒိသုအဘို့အယောက်ျားတွေမှအနောက်နိုင်ငံများလိုသူတွေ့ဆုံပြီးချထားရ။ အဆိုပါအရာအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်ပိုပြီးအရာအတွက်နည်းလမ်းများသင်သွားနိုင်ပြီးဒီထက်အဘယ်အရာကိုသင်မျှော်လင့်လာနိုင်တယ်။ နေစဉ်အလွန်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုမည်အကြောင်း သို့ရောက်လာ၏စိတ်သည်အကြောင်းသင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အရက်ဆိုင်နှင့်ဒါခေါ်'လွတ်ပါ'၊အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်အခြားအကောင်းသောမိန်းကလေးများသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါမှအခြားတည်နေရာ။ သို့သော်၊ယေဘုယျအားဖြင့်၊အောက်ပါအချို့သောအရပ်တို့ကိုရနိုင်ရှိရာမိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွား ၊ငါမူကားရန်ရှိသည်ဤထည့်သွင်းလျှင်ခံရဖို့မယ်အကြောင်းပြောနေတာအစည်းအဝေးအမျိုးသမီးတချို့။ သေချာသလောက်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအရာ၌သင်ရနိုင်မိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်သည်အားဖြင့်ရရှိနိုင်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတဲ့ဟွတ်။ ဒါကြောင့်ကယ့်အရေးမပါဘူးဘယ်မှာသွားအတွက်၊ပိုကြီးမြို့ကြီးများကဲ့သို့မနီလာ၊၊ဘူ၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လိစ်သို့မဟုတ်၊သို့မဟုတ်ပင်သေးငယ်တဲ့မြို့ဖြစ် သို့မဟုတ် ၊ဒါဟာလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မေးခွန်းတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်အလှမိန်းကလေးများနှင့်ပတ်ပတ်လည်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အမြဲအဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများ။ သင်သည်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်၊သို့သော်၊ကကြီးအတွက်အမြို့မြို့၊သင်ရနိုင်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဘူ၊အများကြီးပိုပြီးနှိုင်းယှဉ်ရင်သေးငယ်သောမြို့ဖြစ်ပေးမှူးမတ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောခြင်း၊နှစ်မျိုးရှိပါတယ် သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ။ အုပ်စုတစ်စုသည်အလွတ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်သောသူတို့သည်မိမိတို့အားဖြင့်၊သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုတွေ့ဆုံရန်အတွက်ညဥ့်အခါကလပ်အသင်း၊အရက်ဆိုင်များ၊လမ်းနှင့်ဈေးဝယ်။ လည်းရှိပါတယ်ဘားမိန်းကလေးများလည်းခေါ်အဖြစ်နှိပ်နယ်မိန်းကလေးများ၊သူဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အလုပ်ခန့်။ အများအားဖြင့်၊သူတို့ပိုပြီးစျေးကြီးအဖြစ်တစ်ခုရှိပါတယ်ရာခိုင်နှုန်းကဘားပိုင်ရှင်။ သင်ခံစားရလျှင်သင်အကြောင်းများအတွက်ပေးဆောင် မကယ့်ကိုသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၊သို့မဟုတ်ပဲသင်ချင်တယ်ပိုက်ဆံဖြုန်းကိုရှောင်ကြဉ်နှင့်အချိန်ပေါ်မိန်းကလေးများမှဤနေရာ၊သင်ချင်စေခြင်းငှါဖန်တီးဖို့တစ်ဦးပရိုဖိုင်နှင့်ပူးပေါင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာ။ မသုံးကြမည်သည့်အခြားသူများမူကား၊ငါကြပြီမဟုတ်လို။ ငါကြားဖူးတယ်အခြားသူများထံမှဝေးအားဖြင့်အကောင်းဆုံး။ ရှိမရှိသင်နေ့စွဲသို့မဟုတ်အချို့သောပျော်စရာ၊ဖိလစ်ပိုင်သိရသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေ၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များကိုဖိလစ်ပိုင်-အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သင်တစ်ဦးခရီးသွားလာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအရပ်တို့ကိုမသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်တိုးချဲ့ဖို့သင်၏ ဆံခံရဖို့ထက်ပိုရုံဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုအတွင်းရှိဘားသို့မဟုတ်ညဥ့်ကလပ်၊နှင့်အထက်ထောင့်အသင့်ကွန်ပျူတာ၏မျက်နှာပြင်၊ဒါဟာဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်။ သို့သော်၊ကလူယောက်ျားကဲ့သို့အဘယ်သူသည်တွေ့အကြုံဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးမှအလံရှိပါတယ်၊အချို့အကြံပေးချက်များမျှဝေပေးနိုင်လာပါတယ်။ ရတဲ့မိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလုံး၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှား။ နေစဉ်သင်ပေးဆောင်ရနိုင်မိန်းကလေးများအလွယ်တကူပဲ၊သို့ရတဲ့အစစ်အမှန်နှင့်အစည်းအဝေးအကောင်းမိန်းကလေးများအတွက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအချို့အခြားအမှုအရာ။ စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သောအရာသက်ပန်မိတ်ဖက်ရှိခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်ချစ်ခင်များအတွက်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသောချစ်ခင်အားဖြင့်အချိန်။ အလှည့်ကြပါဘူးကွာအလွယ်တကူ၊ခံစားစိတ်ဓာတ်၊အထူးသဖြင့်လျှင်စဉ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြောသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအတော်လေးသေချာသေးလျှင်လူတစ်ဦးသင်၌စိတ်ဝင်စား။ ဤအရာအားလုံးကိုယဇ်နှင့်အန္တရာယ်လိမ့်မည်ကျိန်းသေကတန်ဖိုးရှိတစျနေ့။ နေစဉ်သင်ရှိစေခြင်းငှါအဖြစ်လူနာအချို့ရက်သတ္တပတ်၊လသို့မဟုတ်နှစ်ကြာသင်မျှော်လင့်သောရလဒ်တစ်ခုအကြောင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ အားကောင်းဆက်ဆံရေးနိုငျသောသည်းခံတစ်သက်တာ။ အရေးအကြီးဆုံးကနေအတွက်ခြားနားချက်ယဉ်ကျေးမှု၊အမှန်တကယ်ပွင့်လင်းစိတ်လောက်အသစ်သောအရာသင်ယူ။ ဒီရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမိန်းကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။
ဆော့ဖ်ဝဲတင္သြင္းအိန္ဒိယမှာ၊ရိုက်နှက်ဖို့အသေခံ ဖီး။ အဆိုပါလူအုပ်စု၊ငါထင်ခဲ့တဲ့ကေလး ၊အစီရင်ခံရန်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊အနည်းဆုံးတစ်ဦးသူ၏အပေါင်းအသင်းကြီးလေးအနက်ဒဏ်ရာရ။ အဆိုဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့များ၊လူအရောက်အပေါ်သောကြာနေ့ကနေဟိုက်ဒရာဘတ်နှင့်အတူမိတ်ဆွေများကလေးသူမှပြန်လာအတွက်ပျော်ပွဲစား တွင်အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသ၏အရိပ္ပြည်နယ်အဖြစ်အစိတ်အပိုင်း၏အုပ်စုတစုရပ်မှာရွာတစ်ရွာ။ ၏တစ်ဦးအဖြစ်အ ၊ကလေးချောကလက်ငါပူဇော်ကြ၏နေထိုင်သူများအနွေးကျေးရွာ၊ငါဖန်ဆင်းအဖီး။အမျိုးသားများထွက်ပြေးတိမ်းကကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားနီးအနီးအနားရွာ။ကတည်းကမှားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံကျယ်ပြန့်ဧည့်သည်ထင်ရှားပေါ် ဆိုက်၊လူအစုအဝေးတွေကိုဤအုပ်စုဘို့စုဝေးနှင့်တက်ရိုက်နှက်။ ရဲတွေပြီးခင်ပွန်းရဲ့အသေခံ၊ဒါပေမယ့်မရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြ။ နောက်အဖြစ်အပျက်၊ပင်ပိုပာသည္။ ပေမယ့်အများပြည်သူအသိပညာပေးလှုံ့ဆော်၊အလားတူဖြစ်ရပ်များ၏မူးယစ်ကုန်ကူးမှုများဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မကြာသေးမီလများ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့။.
အိန္ဒိယချက်တင်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ၊သူငယ်ချင်းများပါစေနှင့်ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူလုံးဝအခမဲ့စာသားနှင့်ဓါတ်ပုံများပေးပို့၊ဆက်သွယ်အသီးအသီးကိုယ္ေ၊ပုဂ္ဂလိကအတွက်ပုံစံနှင့်အလုပ်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေ၊ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည် စကားပြောအိန္ဒိယ၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊အိန္ဒိယ၏မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါ။ ဤသည်အိန္ဒိယချက်တင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်စကားပြောချစ်သူများထံမှအိန္ဒိယ။ အခမဲ့ချက်တင်အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ။ လူတိုင်းရွေးချယ်သင့်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုသူအမည်အားပုံစံနဲ့စကားစတင်။ ဆက္သြယ္ေလူသစ်နှင့်အတူလွယ်ကူဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှသိရသည်။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာနှင့်အတူဖန်တီးအနေနဲ့အိန္ဒိယစကားပြောခန်းနိုင်အောင်သင်မွေ့လျော်၏။ သူတို့အနေနဲ့အိန္ဒိယစကားပြောဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများအားလုံးအိန္ဒိယကျော်။ ကျနော်တို့ချစ်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံအသုံးပြုပြီးအိန္ဒိယချက်တင်အက္ပ္ကို၊ကျနော်တို့ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာလူသစ်နှင့်အတူ၊ကျွန်တော်အချစ်သစ်ကိုဖြစ်ခြင်း။ အိန္ဒိယစကားပြော၊ကျနော်တို့အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါနှင့်သစ်တစ်ခုခုသင်ယူ။ သငျသညျအစဉျကို။ သင်သည်အစဉ်အဆက်ချင်သွားဖို့အိန္ဒိယနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုအရပ်တို့ကို၏အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုး? အိႏၵိယသိဘာမှမထက်သာ။ ထို့ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ချက်တင်ဆိုက်တစ်ခုလွတ်လပ်သောလှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုသောပူးပေါင်းဖို့ ပူးပေါင်းအိန္ဒိယနှင့်စကားပြောအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားသည္။ သင်အိန္ဒိယနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်လူမျိုးသင်သည်သင်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကနေ? ကောင်းစွာ၊ဒီအဖြစ်နိုင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးနေရာရှာဖို့အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေ။ အကြှနျုပျကိုမယုံကြည်ကြဘူး၊ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အစဉ်အမြဲသင်တို့လက်၌ရှိ၏။ ရှိလိုလျှင်၊ထို့နောက်သွားကြကုန်အံ့။ တချိုအရာကူညီပေးနိုင်သည်အများအပြားနေ့ရက်ကာလနှင့်လည်းကူညီရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအများအပြားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအတွက်စကားပြောအက္ပ္ကိုယ။ အခမဲ့ အိန္ဒိယအတွက်။ ဧည့်စကားပြောနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်စာသားခ်ိတ္ဆြဲရန္စာဖော်ပြဂိမ္းမ်ားႏွင့္အက္ပ္မ်ား၊သင်ကူညီဒီဂိမ္းမ်ားႏွင့္အက္ပ္မ်ားကိုပိုဖို့အခြားအသုံးပြုသူများ၏ဇာတိအမေရိကန်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။
ရေဒီယိုနှင့်အတူစွမ်းအင် အားလုံးဂျာမန်အင်ချန်နယ်နှင့်အခြားချောင်းရေအတွက်အွန်လိုင်းရေဒီယိုနှင့်မိုဘိုင်းချက်တင်အိမ်။ ေတစ်ဦးအချိန်ဇယား။ ယနေ့။ လျှပ်စစ်အာရုံသို့မဟုတ်ကျနော်တို့မိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုး၏အသံချက်တင်အပေါ်ရေဒီယိုနှင့်အေဂျင်မြင်းကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မြင်ထုတ်ကုန်ထောက်ခံမှုကွန်မြူနတီဖိုရမ်အခြားပံ့ပိုးမှုရစ်။ အွန်လိုင်းကစီမံပံ့ပိုးဆော့ဖ်ဝဲကို ထားနုပညာအွန်လိုင်းအာရုံစိုက်။ ထားနုပညာအွန်လိုင်းအဖြစ်အပျက်:အလွန်ကြီးဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်:မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်စုအမည္ကိုများလွှတ်ပေးရန်အခမဲ့အြန္လိုင္းဂိမ္းမ်ားကစားလူကြိုက်အများဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ချွန်ထက်အသေး၊ကိုက်၊ နှင့်ပုံဖဲချပ်။ ဤသည်အဓိကအစာမျက်နှာ၏-ဂျာမန်စကားပြောအိန္ဒိယမိန်းကလေးများ၊အိန္ဒိယမိန်းကလေးများ။ မြန်မာဘာသာ။ ခ်ိန္ၫဖြေရှင်းရန်အတွက်အွန်လိုင်းပဋိပက္ခထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်း။ အရှေ့တောင်ထားပါ ထားပါမမကည့္ရႈရန္ႏွင့္အကောင်းဆုံးအနှုန်း ဆင္း၊ဆာင္ရြက္ရန္မွာမိ။ ဤစာအုပ်အွန်လိုင်းအဖံုးနှင့်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုအခုအချိန်မှာ။ စကားပြောပြားချပ်ချပ်သာကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ဒီဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ္ဝက်ဘ်ဆိုက်၊သငျသညျသဘောတူရန်ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်း။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် အမှန်မှန်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး။ အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာ။ နေအိမ်တွင်အပျက်။ အနက်ပြပါ"ကျက်"အိပ္ခဟာသအိပ္ခကမ်ထုတ်လွှင့်မ္းသည့်အကြောင်းအရာတူ ။ ထိသတင်းတွေအွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများ။ ဝင်မည်။ ငါနေချင်ဖင္။ လေအိန္ဒိယကြော်ငြာခြင်းသင်္ကေတပြ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းကက်၊သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အတွက်ရေးသားအမ်ဳိးအခါပေးဆောင်။ အကောင်းဆုံးသစ်သား၏ကယ်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်:အဖြစ်မကြာမီသင်ပွင့်ကောက်သင်တို့၏ပစ္စည်းကိုအွန်လိုင်း၊သင်သည်အီးမေးလ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အားလုံးသော သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်အမှုအည့္ျခင္း(အဆီ)၊အဘာသာပြန်ဆို၊နှင့်အဘယ်သို့ဆိုလူယုတ္မာ၊ဒါကြောင့်ငါ့အအတွေ့အကြုံအများဆုံးယောက်ျားရှိသည်ထိန်းချုပ်မှုကျော်တယ္။ သူတို့ခံစားရလေ့ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်ဖိအားပေးခံရသည့်အခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးကြိုးစားဖို့တာဝန်ယူသည်။ အများစုမှာအမျိုးသားများအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသောသူတစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည်လိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမကပြဿနာကိုရှင်းပြသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်။ သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းကိုမပေးပါဘူးအကြံဉာဏ်ကိုအလေးအနက်၊သူဖြစ်ကောင်းဘို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဒီအဆင့်လုံခြုံရေးတာဝန်ဝတ္တရားများ။ ထို့အပြင်၊ဒါကြောင့်မကြာခဏအကောင်းဆုံးအထိစောင့်ဖို့သူကအဆင်သင့်လုပ်ကတိကဝတ်၊သူတစ်နှစ်ခွဲ-နှလုံးတိပြုသည်၊ထို့နောက်အများကြီးကျေနပ်မှုပြီးနောက်။ တခါတရံအတိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအကြောင်းနောက်ဆုံးမှာသို့ကြီးပြင်းဖို့ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုညှိုးနွမ်းသွေ့ခြောက်ပြီးသေဆုံးကြောင့်အလျင်အမြန်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊သင်သည်သင်၏လူနာစောင့်များအတွက်လူတစ်ဦးကို"လာ"၊သူတို့မထင်ချင်မှကျူးလွန်အနီးအနာဂတ်၊ထိုအခါဆက်ဆံရေးအသင့်ဖြစ်နိုင်ညာဘက်ကိုရာအရပျ၌။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်။ မဆိုအမှု၌၊သင်သည်အဖြုန်းဖို့လိုအပ်အချိန်ကြာမြင့်စွာတနင်္ဂနွေတစ်ဦးတည်းနှင့်အမှုအရာမှထွက်တွက်ဆ။ သို့မဟုတ်အမြင်တစ်ဦးကုထုံးကူညီနိုင်သူသင်ရွေးချယ်သင့်ရဲ့ခံစားချက်။ သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကတိကဝတ်ကိုသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကသင်အလွဲသုံးစားလုပ်၏သိပ္ျ၊နှင့်လးပါ။ လျှင်သင်အလေးအနက်ကအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ဒါကြောင့်အကြောင်းသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏၊ထိုအခါသင်သည်ပြုရမည်။လျှင်နှင့်အတူမျှဝေသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ယူ၊အကူးချွတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူသူသူမ။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်ကြွယ်ဝသောများမှာ။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်ကြွယ်ဝသောများမှာ။ ထိုအခါရှိပါတယ်အားလုံးအမျိုးသမီးတွေလျော့နည်းစိုးရိမ်လောက်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်အလေးချိန်နှင့်အကြောင်းပိုစိုးရိမ်ကြင်နာမှု၊မောက်၊ထောက်လှမ်းရေး၊ကျင့်ဝတ်များ၊ပျော်စရာ၊နိုင်ငံရေး၊ရုပ်သံပြပွဲဦးစားပေးမှု၊တာဝန်၊လိင်ပုံများ၊အကယ်လို့ခွတော်ဘယ်ရီသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်။ အဘယ်သူမျှမ။ အဖြေကိုအောက်လုံးဝမမှန်ကန်။ အိမ်ထောင်နှင့်သားသမီးမ၏အစိတ်အပိုင်းလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုသာပါဝင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အသီးအသီးအခြား။ ထိုအမှတပါး၊သားသမီးဆုိး၊ ချင်သောကြောင့်။ ဘယ်တော့မှလျှင်ရချင်ထောင်သို့မဟုတ်ကလေးများရှိသည်၊ပြီးတော့အလေးနက်၏အစိတ်အပိုင်းဆက်ဆံရေးသည်အားလုံးရင်းသင့်။ သူတို့ကပဲရှိနေကြသည်မဟုတ်။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့၊သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့လူတွေထိခိုက်၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး။။။။။ ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းချစ်ကြ၊ထိုအခါတောင်းသင့်ချစ်သူတွေလက်ထပ်ကွာရှင်းဖို့သူ၏ဇနီးအောင်သင်၏နှစ်ခုအတူတူနထေိုငျနိုငျ။ သင်၏မယားကိုထိုက်ပါဘူးနာကျင်မှုနှင့်သူ၏အကူအညီဖြစ်စေသည်။ လူကိုငါလက်ထပ်၊ငါကရှာဖွေတွေ့ရှိသူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များ၊ဟုတ္ကဲ့၊အားလုံးငရဲကိုဖဲ့ဖြည်၊နှင့်တွေ့ကြောင်းသူအမြဲဖို့နောက်ကျောကြွလာသောကြောင့်၊"သူမကပြောပါတယ်၊"ကျွန်မခင်ပွန်းမယ်လို့သူကပြောပါတယ်နှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖျက်သူမ၏နှင့်အဘို့အရုံစောင့်ဆိုင်းရန်ညာဘက်ယခုအချိန်တွင်အကြောင်းဒါကြောင့်သူမနာတရ၊ပြုလေ၏ရုံနဲ့တူ။"သူကလည်းညာဖက်ခဏစောင့်ဆိုင်းနေကိုငါ့အားပြောသောသူအနေနဲ့ဒီကိစ်စရှိခြင်းနှင့်အတူလက်ထပ်ပြီးသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အမြိုးမြိုးအမှုအရာ၊နှင့်အလွယ်ကူဆုံးပြဿနာခဲ့ကြောင်း၊ ငါပြောကျွန်မခင်ပွန်းခဲ့နေ့စွဲအပေါ်သွားနှင့်အတူသူမ၏၊ငါဖူးမြင်လို။"ဒီလူဘယ်သူရမယ်ငါ့ကိုချစ်သည်အထိသေပြုပြီးစိတ်အပိုင်း။ ငါအစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ လို။ ယုံကြည်ခြင်းရှိကစားရန်အခန်းကဏ္ဍ၊ကျွန်တော်လေ့လာသိ။ ဒါဆိုသူကကိုချိုးဖျက်ဖို့မစောင့်နိုင်တက်နှင့်အတူသူမ၏၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလွှတ်နိုင်၊ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲပေါ့ကွာရှင်းရတဲ့၊ဒါပေမဲ့သူကသူ့အိပ်တော့လိုအပ်ဖို့ကျန်သေးတယ်။ အင်တာနက်ကို။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အသင်းတော်၌အသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်၊အလေ့အသင်းကိုအားပေးဖို့ထောင်နှင့်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို။ သင်ကတည်းကတစ်ဦးချောမောလူကိုလိုက်ရှာသည်လှပသောမိန်းကလေးအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင့်တဦးတည်းကိုရှာဖွေအတွက်အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားတန်းနှင့်အတူတိတ်တဆိတ်နှင့်အတူ။ အိုကေ၊ငါအတော်လေးသေချာမဟုတ်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်သွားမယ့်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်လုံးဝကျူးလွန်ဖို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံး။ အခြေအနေအပေါ်အခြေအနေနှင့်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးသူ့ကိုပြောပြဖို့အတွက်အဆင့်၊ဒါမှမဟုတ်သင်သူ့ကိုစွန့်ခွာလျှင်သူက"အိုကေ"သို့ဖြစ်စေသူ့ကိုသွားမသင်ကြကုန်သွား ထိုက်။ လျှင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးနှင့်သင်ကြကုန်အံ့ချင်ကြဘူးသွား၊ပြီးတော့မျှမရှိရဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုသတ်မှတ်ထားသောအောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကပါဘူးပညတ်တရားတော်တို့ကိုချိုးဖျက်၊နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသီးအသီးမိတ်ဖက်စေသည်တစ်ဦးကတိကဝတ်ရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ သင်ရုံမရနိုင်ဘူး။ သူကလက်ထပ်သည်၊သင်သည်(သူ)ရှိသည်မဟုတ်စဉ်းစားကြောင်းအများကြီးသူ၏ဇနီး-သူတို့ချန်ထားသီးအသီးအခြားတည်းနိုင်အောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူ့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ လျှင်သင်ရှိသည်သောခံစားချက်.
လှန်စကားပြောတဲ့ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောသောအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်အတွက်အပိုပင္။ ရှေးရိုးစွဲအတွက်ဒီစကားပြောကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီအားလုံး၏ပထမဦးဆုံးအ ။ အဲ ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမသွားရန်စာမျက်နှာဖွင့်ကမ်များအပေါ်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဤလွယ်ကူသောအဆင့်များကိုပေးမည်သင်ပျော်စရာတွေအများကြီးဖြစ်ပါသည်၊အရာအတွက်သာဖြစ်နိုင်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများ။ လှန်စကားပြော-အကျင့်ကိုကျင့်၏နိယာမအပေါ် နှင့်သင်လုံးဝကြိုက်လိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာအများအပြားရှိပါတယ်တူသောထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊နှင့်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်းကိုအမြဲကြိုးစားစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းဖို့ပိုပြီးလူကြိုက်များဗီဒီယိုချက်တင်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုနှင့်ဗီဒီယိုစာတိုပေးပို့။ မကြီးအချိန်လွန်ပြီ၊အဖြစ်အလှန်စကားပြောဖြန့်ချိဗားရှင်းသစ်၊အသစ်။ ၏သင်တန်း၊အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များဗီဒီယိုချက်တင်အမြဲကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကျေနပ်။ အချို့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကမ်းလှမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုအလှန်စကားပြောအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်:အရွင္ပ၊လှန်စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊အရာအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲပြီးကမ်းလှမ်း၎င်း၏အသုံးပြုသူများအရာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအဘို့အပိုပြီးသာယာသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကောင်းသောအချိန်ဖြုန်း။ သင်သည်ဤတွေ့မြင်နိုင်သည်ရုံအနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံအတွက်။ အများစုကကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၏တွေ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခုအတွက်အလှန်စကားပြော နှင့်ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြု။ ဤသက်သေအားဖြင့်ကောင်းတက်ရောက်သူအလှန်စကားပြောည့္ပါ။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအမှာကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောတိုင်းပြည်နှစ်ခုရှိပါတယ်တရားဝင်အလံ။ လျှင်ထိုပြည်ကို၊အမျိုးသားအလံများနေရာတိုင်းထ၏အဆုံးမှကိုးရာစုနှစ်အသာကျမ်းစာ၌ရေးထားဘာသာစကားဖိလစ်ပိုင်တွင်။ နှင့်၎င်း၏မသင်မလေ့လာမှုအတွက်ကျောင်းမှသာအဆုံးသတ်အဖိလစ်ပိုင်ကျွန်း၏ ခဲ့အကြီးဆုံးရေတပ်တိုက်ပွဲအတွက်သမိုင်း:အမေရိကန်-ဂျပန်အတွင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်။ ဖိလစ္ပိုင္အလွန်လှပသောသားသမီးများ၊ဒါပေမယ့်ဘယ်လို၊သူတို့အလုပ်သူတို့အတွက်အတိအများစု၊အရုပ်ဆိုးအရွယ်ရောက်ပြီးမရှင်းလင်းသေး။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ၊အဘယ်သူမျှမဆက်စပ်ညွှန်ပြနှင့် ၊ရယူထားသောအဖြစ်အတူတူအားလုံးအခြားလူများ။ သိကောင်းစရာများအကြောင်းမုတ်ခြေထောက်-ခက်၊အထွေထွေအတွက်၊ဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရန်ရှည်သောဆံပင်အပေါ်ဦးခေါင်း၊ဂျိုးနှင့်ခြေထောက်မှာဒီရာသီဥတု။)မျှော်လင့်နေဆဲအချို့သောနယ်မှဥပမာအားဖြင့်အကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအနီသည်အများဆုံး မြို့(ဒါဟာထွက်လှည့်ကြောင်းမရေတွက်လူဦးေရ၏၊ငါသည်ထင်၊နှင့်သိပ်သည်းဆ)၊နှင့်အကြောင်းကျော်ကြားသောအကျဉ်းထောင်၊အရာတူ၏ဂင်းနစ်စာအုပ်မှတ်တမ်းများတယ်၊သင်ထည့်နိုင်သည်နှင့်အတူလင့်များနှင့်ဗီဒီယို)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်စေဖို့တစ်ဦးတစ်ယောက်အတူတကွ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဖန်တီး ချစ်ခံရဖို့တစ်ဦးရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူဖြည့်ဆည်းဖို့နည်းလမ်းရှာတဲ့စစ်မှန်တဲ့။ ဤဆိုက်သည် အဓိကမြှင့်တင်ရန်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဒါကြောင့်လိမ့်မည်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်သင့်အထူးတစ်စုံတစ်ဦး။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်သင်၏ဖိလစ်ပိုင်ကလောင်ပဲ၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သို့မဟုတ်ရုံ၏ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာရိုက်ကူးဖို့သူ့မှာမြှားသင့်နှလုံး။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်ကူညီပေးသည်ကျဉ်းမြောင်းသောအလယ်မှထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ဦးတစ်ယောက်မှဆင်းကိုက်ညီသောသူတို့ရွေးချယ်ထားသည့်အုပ်စုလိုက်ဖက်ရိုက်။ ဤသည်အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဆိုပါအကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်သည်ရှာကြံအောင်မြင်သော၊ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေး။ ဒီအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊မ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသင်ထုတ်ဝေနေတဲ့ပရိုဖိုင်၊လှောရှာဖွေခြင်းသည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ၊နှင့်သင်မည္သူတွေနဲ့အတူတူ။ ဒါပဲ။ မရှိတော့ပါ၊မနည်း။ အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသာစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ။ အာရုံကရှေ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့သူငယ်ချင်းကအမေရိကန်။ ယခုသင်၏အကြွေးကဒ်လွပူးပေါင်းလူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊တန်ဖိုးအားဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ မင်းသမီးနှင့်နိုင်ငံခြားလူတို့။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အရာအခမဲ့။
ကလပ်"အချစ်မြို့"တကျိပ်တပါးသော အမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်အမြန်မော်စကိုတွင်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းပိုပြီးထက်တထောစေတီမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့၊ငါတို့သည်အများထက်ပိုသုံးဆယ်ဧည့်သည်၊အမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ဘုန်းတော်ကိုစိတ်နှလုံး၏အကြောင်းရှစ်ရာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ အညဦး:ဓါတ္ပံုသင်တန်းသားများ၏၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၊အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကြိုက်နှင့်ကိုက်၊နှင့်လည်းအမည်များနှင့်အရေ၏ဧည့်သည်အဘယ်သူသည်သင်ရွေးချယ်စေလွှတ်လိမ့်မည်တွင်းနှစ်ဆယ်လေးနာရီပြီးနောက်။ အညဦး:ဓါတ္ပံုသင်တန်းသားများ၏၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၊အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကြိုက်နှင့်ကိုက်၊နှင့်လည်းအမည်များနှင့်အရေ၏ဧည့်သည်အဘယ်သူသည်သင်ရွေးချယ်စေလွှတ်လိမ့်မည်တွင်းနှစ်ဆယ်လေးနာရီပြီးနောက်။ ရူလျှင်ပေးဆောင်ယနေ့အွန်လိုင်း။ နှစ်ခုလက်မှတ်တွေကိုပွတ်သပ်သည့်အခါသင်ပေးဆောင်အွန်လိုင်း။ ပွတ်မှာဝင်ပေါက်ရရှိနိုင်မှုမှဘာသာရပ်။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေ။ ပွတ်တိုက်သောအခါပေးဆောင်ယခုအွန်လိုင်း။ သူငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးလက်မှတ်တွေကိုပွတ်သပ်သည့်အခါသင်ပေးဆောင်အွန်လိုင်း။ ပွတ်မှာဝင်ပေါက်ရရှိနိုင်မှုမှဘာသာရပ်။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေ။ အညဦး:ဓါတ္ပံုသင်တန်းသားများ၏၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်၊အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့အနား ကိုက်ညီ၊နှင့်လည်းအမည်များနှင့်အရေ၏ဧည့်သည်အဘယ်သူသည်သင်ရွေးချယ်စေလွှတ်လိမ့်မည်တွင်းနှစ်ဆယ်လေးနာရီပြီးနောက်။ မင်္ဂလာပါ။ ငါဆိုချင်တယ်တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးသင်တို့၏ကလပ်တွေ့ဆုံေအာက္တိုဘာအမ်ဳိးအစားသင်ကညဦးယံ၌၊နှင့်မတ်လများ၏ယခုနှစ်တွင်ကျင်းပသည့်ကျွန်ုပ်တို့မင်္ဂလာဆောင်။ တွေ့ဆုံနြေ္ဒကလပ်မှာချိန်းတွေ့အချစ်မြို့တော်ကိုအပေါ်ပါတီနွေဦးအတွက်၊ကံကောင်း:ငါတွေ့ငါ့အနာဂတ်ခင်ပွန်းအပေါ်ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်။ ချစ်ဘယ်လိုအရာအားလုံးစနစ်တကျနှင့်လေထု၏။ အနြေ္ဒအစပိုင်းတွင်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဦးဆောင်မင်္ဂလာဆောင်(ဖြစ်နိုင်ထိခိုက်နစ်နာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြား)။ ငါတို့သည်ယခုရှိသည်အသား: ငါးနှစ်၊။ အရာအားလုံးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချစ်မြို့တော်အဘို့အအံ့သြဖွယ်သည်။ ပါတီမှာချိန်းတွေ့ကလပ် -ထိုမြို့၏ခုနစ်ဖေဖော်ဝါရီနှင့်အတူတွေ့ဆုံ ၊အခုတော့ကျွန်မခင်ပွန်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော်တော်ရယ်စရာအဖြစ်ပျက်၊ငါ၏ညဦးတခါလာပြီးတော့သင်)အကြောင်းစဉ်းစားဘယ်မှာအတွက်တွေ့ဆုံရန်။ ရွေးမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ -မြို့။ တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ဒီပါတီမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့။ စားသောက်ဆိုင်အတွင်း၊သင်သာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ပါတီချိန်းတွေ့"မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့"။ သင်တို့အဘို့-တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်ဆက်၊ဂျေ၊ဂီတနှင့်ကခုန်။ မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းအတွက်ရက်စွဲတတ္သည္။ ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအခိုက်နှစ်သက်သဘောလေထုနှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့လူ။ ပင်ရှိခဲ့သည်တစ်ည။ အထွေထွေအတွက်၊အားလုံးနီးပါးယောက်ျားလက်ဝဲအလွန်ကောင်းသောထင်။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအခိုက်နှစ်သက်သဘောလေထုနှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့လူ။ ပင်ရှိခဲ့သည်တစ်ည။ အထွေထွေအတွက်၊အားလုံးနီးပါးယောက်ျားလက်ဝဲအလွန်ကောင်းသောထင်။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ထဲမှတစ်ခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါလိမ့်မည်တိုင်မီပြည်စိမ်း။ ထို့ကြောင့်၊ကုန်အံ့ရဲ့ပူးပေါင်းနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ယခုက်ပ္အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အခန်း။ ဤသည်ဖိလစ်ပိုင်ကျပန်းစိမ်းစကားပြောခန်း။ သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်အတူဒေသခံစိမ်းဖိလစ်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ အခမဲ့စာသားနှင့်အတူဒေသခံဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး။ ပြောဆိုရန်စိမ်းရဲ့ဖိလစ်ပိုင်စာသား၊ဗီဒီယိုချက်တင်၊အစိမ်း။ ဤသည်အကောင်းဆုံးပြောဆိုရန်အစိမ်းရဲ့စကားပြောဒါင္းချက်တင်နှင့်အတူဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး၊အခမဲ့ဖိလစ်ပိုင်မိုဘိုင်းချက်တင်၊ဖိလစ်ပိုင်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအကောင်းဆုံးဖိလစ်ပိုင် ကိုချက်တင်အခြားရွေးချယ်စရာ၊အကောင်းဆုံး ၊၊၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊အခြားရွေးချယ်စရာအဖိလစ်ပိုင်ချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏၊အခြားရွေးချယ်စရာ ဖိလစ်ပိုင်၊ပိုလန်စကားပြောခန်းများအတွက်တစ်ဦးတစ်။
သစ္စာသည်ပုလဲတို့တွင်အစေ့၏အသဲ။ ဘာမှမပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုထက်အဆည်းခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသည်အမေရိကန်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအသက်ဝိညာဉ်။ သင်ပြုလိုတဲ့ဆန္ဒအသွယ်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်သင့်။ အလှအပနှင့်အသက်အရွယ်အတွက်စိတ်နှလုံးနှင့်အသက်ဝိညာဉ်။ ကျန်ညှိုးနွမ်းမှအတူ၊ပန်းပွင့်၊နှင်း။ အကြားအပွင့်ငါနှင့်တူနှင်း။ နှင်းမဖြစ်သင့်နှင့်အတူရောဂါကူးစက်ခံရဖစ္ဘူး၊အရောင်၊တိုင္းရင္းသား၊သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခွဲခြားဆက်ဆံ။ ကိုယ့်သုတသေနပွု။ လှပသော၊ကျက်။ ၊ဖော်ရွေ၊နှင့်ချစ်စရာ။ နေဖို့အတွက်အိန္ဒိယအနေဖြင့်အဘို့။ ဥပမာအားဖြင့်၊အကနျြးမာရေးကလပ်၊ဖတ်သင်္ကေ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊နှင့်ဟာသတစ်ခုဥာဏ်ကောင်းသောနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏ယာဉ်မောင်း။ သူမသည်အလွန်ကြီးစွာသောစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးသူမ၏ကျန်းမာရေးကို။ခံစားတွေ့ဆုံသူတစ်ဦးအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်အတူအဘယ်သူသည်မိသားစုကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးများ။ရမယ်။ မင်္ဂလာပါ၊ဒီကနေ နိုင်း။ စီးပွားရေးဘွဲ့ရ။ ငါသည်အသက်ရှင်ငါ့မိဘတွေနဲ့အတူနိုင်းအတွက်။ ငါအရှက်၊ပျော့ပျောင်း-ဘာသာစကားမ်ားကိုေျပာဆိုသည္၊အမျိုးသမီးနှင့်အတူမျိုးကွဲနှင့်ဖြစ်ဘို့အရှာနေသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဒီအမျိုးသမီး။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအချစ်စိတ်ဝိညာဉ်လိုသူအချစ်။ ဎအလွန်ချစ်။ ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ချစ်။ အများကြီးနမ်းသောအခါနှင့်ပွေ့။ ကောင်းစွာ၊ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်သို့မဟုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်နှင့်သက်ဆိုင်။ ရိုးရိုးဘုရားရှံ့ချရန် မြေအမျိုးသမီးများရှာဖွေရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ချစ်ဟောင်းသီချင်း၊ဖတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုအားဖြင့်အပြစ် ၊ရောက်နှင့်စူးစမ်းသစ်ရပ်၊ခြောကွဲပြားခြားနားသောဟင်းလျာများ။ မင်္ဂလာပါ။ ငါရှာနေတာပါအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ငါကြည့်ဖို့လိုလားသူတစ်ဦးအဘို့အနည်ထိုင်ဆင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်မိန်းကလေးနှင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ ငါရိုးရှင်းနှင့်ရိုးသားသော၊နှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ဦး၊ကံဳခဲ့ဖူးထောင်-တစ်ရိုးရှင်း၊ရိုးရှင်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့၊မကအညစ်ပတ်စကားပြော၊ငါကြိုက်တတ်တဲ့အဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်။ သူတို့စေနိုင်တယ်၊ညော၊နွေးထွေးသောနှင့်အထောက်အကူဖြစ်လိုသူတို့မိသားစု၊အပေါင်းတို့နှင့်အထက်အထိခိုက်မခံ။ ငါ။။ အဆစျရောငျ။ အသားပြီးသားသူသည်များစွာအသက်အနှစ်။ အဟောင်း။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကအမ်။ ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ကြန္ပ်ဴတာ။ ငါ့ဝါသနာသီချင်းဆိုသံ၊ကခုန်၊ချက်ပြုတ်၊နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား။ ကောင်းစွာ၊အဘယ်သို့ပြောနိုင်ကြောင်းကိုယ်?။။ မရှိကန့်သတ်အပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြ။ ငါသာသွားညတ်ရှိသမျှတို့သည်အကောင်းသောအရာတို့ကိုအကြောင်း။ ဒါပေမယ့်၊သူတို့ပြောသကဲ့သို့၊အလှအပအတွက်မျက်စိ၏အဲန်။ ရိုးရိုးသားသား၊ငါအတွက်မယုံကြည်ကြဘူး။ ဆိုဒ်အများအပြားအမည်ခံအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်မျက်နှာအံ့ကုန်ကျစရိတ်များပြီးနောက်ပူးပေါင်း။ တစ်-အချိန် သည်အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးကိုဆက်သွယ်ဝန်ဆောင်မှု၊အပေါင်းတို့နှင့်အတူအင်္ဂါအဘို့အအခမဲ့အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်နှင့်လက်ခံရရှိသတင်းစကားများ၊ချက်တင်၊လက်ငင်းစာတိုပေးပို့၊ဘလော့ဂ်များနှင့်ပို့စ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝပေမယ့်ဖော်ရွေနိုင်ငံတကာနှင့်အိန္ဒိယချိန်းတွေ့ဖိုရမ်များအဘယ်သူမျှမကကုန်ကျစရိတ်မှာ။ အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမအခကြေးငွေ၊အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်၊အမွတ္ကူပွန်၊အဘယ်သူမျှမပြက်လုံး။ သစ်ဖြည့်ဆည်းအိန္ဒိယတစ်ဦးတစ်မိတ်ဆွေများယနေ့တွင်။ သင်တို့ကိုစုံစမ်းပြီအားလုံးအစဉ်အလာနည်းလမ်းများရှာဖွေရန် အထူးတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်အိန္ဒိယ? သင်ငြီးငွေ့၏အိန္ဒိယအဘားကလပ်မြင်ကွင်းတစ်ခု၊လာမယ့်အိမ်မှတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအိမ်၊အထီးကျန်ကျောက်ပြားကိုအဘို့တယောက်အတွက်ရင်ခုန်စရာအိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်များ၊ဆိုးရွားမျက်စိကန်းရက်စွဲများစီစဉ်အားဖြင့်သွယ်သူငယ်ချင်းများ၊အိန္ဒိယကလပ်အသင်းသည်အုပ်စုတစ်ခုတည်း၊တစ်ခုတည်းအဖြစ်အပျက်များနှင့်အစည်းအဝေးအဘယ်သူမျှမရရှိနိုင်ပါရန်.
မြင်ချင်၏နေအိမ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊နားလည်မှု၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသမီး၊အကြားအရယ်သံများသားသမီးများ၏၊သတိရှိရှိဆုံးဖြတ်ဖို့စတင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးနှုန်းများအပေါ်ပျမ်းမျှနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အောက်ဖစ္ပါတယ္။ ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ကြဘူးသင်မှဗျာ:အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဝန်ဆောင်မှုတခုစျေးနှုန်းသက်သာစျေးနှုန်းမှာအမှန်။ ကြိုးစားခဲ့ကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ကလပ်အသင်း၊အပန်းဖြေအပေါ်။ သုံးစွဲအချိန်အများကြီးစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အနည်းငယ်ရက်စွဲများအကြောင်း၊ငါတို့သည်လွှင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလမျးညှနျ။ အဖြစ်ထားပြီးငြီးငွေ့၏၊ဤ ၊ယုဂ်အပေါ်တံဆိပ်အရုပ်နှင့်စီးပွားသင်တန်းပို့ချအဘို့အအကြီးတန်းမန်နေဂျာများသူစကားပြောဖို့သင်သူမ၏အလုပ်ရှင်။ ငါကောင်းတစ်ဦးပညာရေး၊ကြီးစွာသောအလုပ်၊ဒါကြောင့်အပေါင်းတို့သည်လက်ျာနှင့်အတူပစ္စည်းများ၏မေးခွန်းကို။ ဒါပေမယ့်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လောက်ဇနီးတစ်၊ကျွန်တော်မသိဘူး။ ငါပြီးသားယုံကြည်ကြောင်းကံကောင်းခဲ့ပါတယ်လက်တွေ့။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော။ မှအသီးအသီးတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်ပစ်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်ခြင်း၊အတွက်ငါ့ ထွေး၊သူသည်ငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်များအတွက်ယူရို။ တစ်ဦးနောက်ကောက်။ ငါသောက်ရတစ်ပါတ်၊ထို့နောက်အထက၊ငါ့မျက်နှာကိုဆေးကြောလိုက်တဲ့အလောဘ။ အစဉ်အမြဲချိန်ညှိဖို့သူမ၏အချိန်ဇယား။ နားလည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သူမများရဲ့အလိုဆန္ဒများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်း။ နှစ်အောင်မြင်ပြီး၊ဘာမှမပြောင်းလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်နောက်ဆုံးစကားသူမပြောတဲ့မိသားစုနဲ့ကလေးများဖြစ်တဲ့နေ့၊ဤအသက်အတွက်မဟုတ်ခဲ့။ ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်အဘယ်သူမျှမပိုမိန်းကလေးများအဘို့အဘယ်သူမိသားစုတန်ဖိုးများကိုဦးစားပေးပါ
ဃသည်အထိစောင့်ဆိုင်း၏။ထိုတာေျ ဖြစ်လာအဖြစ်ၡမ်ားဖြစ်၏ဗိမာန်အနုပညာ၊ဒါပေမယ့်ဝုဒ်သည်မကျိုးအားဖြင့်အကငျြ့၏။ သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းအိန္ဒိယအတွက်၊အကြားဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားပြင်းထန်စွာကလွှမ်းမိုးဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ သီအို၊လိင်နေရာယူသင့်ပါတယ်သာလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်၊နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏သီလနှင့်ဂုဏ်သတင်းကိုဂရုတစိုက်စောင့်။ ပါကမိန်းကလေးတစ်ဦးကျူးလွန်ဖို့ရှိပါတယ်အ ၊အရှက်ကိုလည်းအားလုံးသူမ၏အစ်မ။ င္ငံနီးပါးအရာအားလုံးကိုရောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း၊အိန္ဒိယလူမျိုးနှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်။ ၏သင်တန်း၊ဒီသာသက်ဆိုင်သူအမျိုးသမီးအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ထို့ကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရအသက်အဘို့အ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဲဒီမှာအများကြီးအတွက်သူတို့ကိုအိန္ဒိယအတွက်ပိုမိုကြွယ်ဝစက်ဝိုင်း၏မြို့နှင့်အတူအေးမြလူမှုရှုခင်းတူ၊မွမ်ဘိုင်း၊လုပ်ဂျော့ဘ်သို့မဟုတ်ဘန်၊ထို့နောက်သင်ဖြစ်နိုင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့စက်ဝိုင်းသည်အဘယ်အရပ်ဓလေ့ထုံးတမ်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပေါ့ပေါ့လိင်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ သို့သော်၊ကိစ္စအများစုအတွက်၊ပျမ်းမျှအမျိုးသားခရီးသွားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပြေစေရန်အိန္ဒိယမိန်းကလေးတစ်သောကြောင့်၊သူတို့ရိုးရိုးမ၏အစိတ်အပိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊သို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ပြီးလျှင်သူနည်းနည်းနဲ့ရှာမတှေ့ပါဘူးတစ်လမ်းအရှေ့၊ပြီးတော့"အချစ်"မကြာခဏဆက်စပ်အတူအများအပြားအခြေအနေ။ သငျသညျတခါတရံတွင်မြင်ရ ရတဲ့လက်ထပ်ရန်၊ဒါပေမဲ့တချိန်တည်းမှာပင်လက်ထပ်။ ဒါ့အသာအေး၊အိန္ဒိယသောသူယောက်ျားတွေတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှတစ်ဦးပိုပြီးကြွယ်ဝနောက်ခံသူရှိစေခြင်းငှါအခွင့်အခရီးသွားလာနှင့်အနည်းငယ်ပုံစံတစ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်အပေါ်အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်နေဆဲအနည်းငယ်ခေတ်-ကျေနပ်နိုင် အဟောင်းတွေ။ ကြွင်းသောအရာအိန္ဒိယအယောက်ျားလမ်းပေါ်မှာအမြဲအဆင်သင့်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုကဗြဟံနုနှင့်သာရှိသည်ဟုဝိုး၊ဝုဒ်-ကြိုက်ဘယ်အရာ၏စိတ်ကူးလိင်သည်။ လိင်ပညာေရးကတိအများစုအတွက်အစိတ်အပိုင်းများအိန္ဒိယမှာ၊သင်သေချာရှိသမျှသောအတွေးအခေါ်များရှုပ်၊အမျိုးသမီးအော်ဂဇင်၊နှင့်လိင်ကြာတော့မိနစ်အနည်းငယ်ထက်ရှားပါးပါတယ်။ ကိုယ့်အဖြစ်အိန္ဒိယဟာဒါအဖိနှိပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထုတ်လုပ်ကြောင်း ကိုးနဲ့ဆှပုတွေ့နိုင်ပါသည်မှာထမ်းဘိုးနှင့်မြေ။ ကောင်းစွာ၊အမှုအရာပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လာအခြေခံကျကျပြီးကျော်အနည်းငယ်ရာစုနှစ်များစွာ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်တာဝန်အိန္ဒိယအတွက်။ ဥပမာအားအောက်ပါ၏ဘုရားအတူပိုင္ဆိုင္မႈ၊ဟိန္ဒူလက်ထပ်ထိမ်းမြားသငျ့နှင့်မျိုးပွားများအတွက်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကောငျး၊ဒါပေမယ့်အဖြစ်ဘာသာရေးတာဝန်။ သူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုအစဉ်အမြဲဖြစ်။
ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောလူကမ္ဘာအနှံ့မှရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့။ ကူညီပေးပွဲဖိလစ်မိန်းကလေးများကဲ့သို့ဖိလစ်ပိုင်ယောက်ျားတွေနှင့်နိုင်ငံတကာပါဘူးကတည်းကဒါဟာပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်၊နှင့်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ။ သုံးထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသားတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါရန်၊ပရောပနှင့်ရက်စွဲနှင့်အတူအချို့သောအများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားမိန်းကလေးငယ်များအတွက်။ ဖိလစ်ပိုင်နမ်းသောအဖြစ်သည်နံပါတ်တစ်ဆိုက်ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ချင်သူတွေအတွက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိလစ်ပိုင်အလှမိန်းကလေးများနှင့်အွန်လိုင်း။
ကြောင့်ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်၊အသစ်စံမ်ားမကြာခဏကန့်သတ်။ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာ၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်။ အမှုအတွက်အမျှအကြားအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပရိုဖိုင်း၊အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုဖို့ခွင့်မှတ်ပုံတင်များ၏အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏လိင်နှင့်အတူကန့်သတ်သုံးစွဲခွင့်။ လျှင်အကြားချိန်ခွင်ရှိပါတယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပရိုဖိုင်း၊အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရန်မှတ်ပုံတင်အသစ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏လိင်နှင့်အတူကန့်သတ်သုံးစွဲခွင့်။
သင်တကယ်တစ်ခုတည်းအာရှအမျိုးသမီးအဖို့သိ၊သင်မူကား၊ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး စိတ်ကူးဘယ်လိုသင်ပြုတာပေါ့။ မတူကပ်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌သဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအာရှတစ်ဦးတစ်ယောက်မှချိတ်ဆက်နှင့်ထွက်ရှာပါ၊အများအပြားရှိပါတယ်ပိုအလားအလာနည်းလမ်းများ။ အဓိကအရာသငျသညျအတက်ကြွနေကြသည်နှင့်သင်မရှိတော့ ပေါ်မှာထိုင်သောအိပ်ရာ၊ပန္ဆဲြေနှင့်တည်းခိုများ၏ရှေ့မှောက်၌။ သူတို့သာသူတစ်ခုခုလုပ်၊သူတို့သာအဘယ်သူသည်ဝံ့ဖို့တစ်ခုခုပြုနိုင်သည်၊အနိုင်အနိုင်ရရှိအတွက်အဆုံးသတ်၊နှင့်၎င်းတို့၏အာရှအိပ်မက်အမျိုးသမီးသိတယ်။ ကောင်းတစ်ဦးကိုမပြုရိုက္ႏအများအပြားတစ်ခုတည်းအမျိုးသားတွေအကျူးလွန်သိရန်အာရှတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်တွဲဖက်။ သို့သော်၊ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အမြဲတမ်းမဟုတ်စျေးပေါမိတ်ဖက်အေဂျင်စီများ။ နှစ်ဦးစလုံးအကြောင်း သို့သော်၊ဒါ့အပြင်အနက်ရောင်သိုးအတွက်မိတ်ဖက်အေဂျင်စီကဏ္ဍ၊ရာမမှန်တကယ်ငြလႊဲရှ၊ဒါပေမယ့်စျေးထွက်၏။ သို့သော်၊နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သည်အလုပ်လုပ်ပညာရှင်ပီသစွာနဲ့အနက်၊သူတို့ဖြစ်ကောင်းအကူအညီဂန္ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၏အိပ်မက်မိန်းမတိုင်းရှ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီများ၊အာရှ၊အမျိုးသမီးအတွက်အထူးပြု၊အားဖြင့်ကျားမနှင့်အတူ၊တစ်ဦးကောင်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးသမီးပရိုဖိုင်း။ လည်းသေချာအောင်သင့်ရဲ့အတိုင်ပင်ပြီးဖြန်ဖြေဝန်ဆောင်မှုများအရည်အသွေးမြင့်မားသော။ ထက်မြက်သော၊ရှာဖွေနှင့်ကောင်းစွာလေ့လာ၊အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေချိန်းတွေ့အေဂျင်ကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်၊အမျိုးသမီးများ၏သူတို့၏အသက်တာမှအလျင်အမြန်ရှာတွေ့ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်း။ နောက်ဆုံးအဆင့်မီငလ်င္၏တစ်ဦးချိန်းတွေ့အဂ်င္စီ၊ဒါပေမယ့်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီအဖတ်အရည်အသွေးမြင့်မားစျေးနှုန်းအစီရင်ခံအတွက်မြေပုံအပိုင်း။ ထို့အပြင်အတွက်ဂန္ထဝင်ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီများ၊ပရောပနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကြောင်းသိရှတစ်ဦးတစ်ယောက်အားမကြာခဏအသုံးပြု အမျိုးသမီး။ နှုန်းထားများများအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အကြင်နာကုန်ကျစရိတ်သိသိသာသာထက်ပိုမိုစျေးသက်သာကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းကိုမွေးဖွားသည့်အချိန်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်၊အာရှ-အခြေခံတစ်ခုတည်းချိန်းတွေ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးပြော။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအမျိုးသမီးရဲ့ပရိုဖိုင်းလည်းပီတိျချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်နှင့်ရောပို။ သို့သော်၊ငါတို့သည်မျှော်လင့်သောအရည်အသွေးအဖြေကအတူတူဖြစ်သင့်၌ဂန္ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီ။ အစားလည်းတည်ရှိများအသုံးပြုမှုအတွက်ရောပေါက်နှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊၏ပုံစံအတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထုနှင့် ။ ဝတ္ထုအွန်လိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လိမ်လည်သူများကိုအတွင်းထဲကနေအထဲက၊ရှေ့တော်၌မြဲမြံစေဖို့ကြိုးစားပါနှင့်အတူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဟာသူတို့ရဲ့သားကောင်မီ၊အရုပ်ဆိုးသောလှည့်ကွက်အဖြတ်အတွက်။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်မေးငြလႊဲ၊သင်အရမ်းဂရုစိုက်ဖြစ်ရပါမည်မလုပ်ဖို့လည်းအများအပြားအံ့ဖွယ်အမှု။ သူဖြစ်ချင်သောသစ္စာဖောက်ခြင်းအားဖြင့်လုယက်ဂိုဏ်း? ဒါပေမယ့်လည်းတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းဖို့ဆွဲဆောင်မှုတည်းအာရှအမျိုးသမီးအတွင်း နေဖို့အတွက်အာရှ။ ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏တိုင်းပြည်နှင့်အရပ်မှာအာရှတိုက်။ ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်မဖြုန်းသင့်ရဲ့လာမည့်အားလပ်ရက်အတွက်အာရှနှင့်လက်ျာအစက်အပြောက်ပေါ်တွေ့ဆုံရန်၊လှပတဲ့အာရှအမျိုးသမီးနှင့်တစ်ဦးတစ်။ တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ထိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဗီယက်နမ်၊တရုတ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊အာရှအများကြီးရှိပါတယ်။ သောသူတို့အဘို့အပွင့်လင်းစိတ်ထဲရှိသည်၊ခရီးသွားလာကြိုက်လားနှင့်ပင်ကဲ့သို့သိရန်ထူးခြားသောနိုင်ငံများနှင့်လူများကိုသိချင်၊ဒါကြောင့်အသင့်လျော်သောအကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအခွင့်သင့်သေချာပေါက်အကောင့်သို့ယူတစ်ခုတည်းသောအာရှအမျိုးသမီးများအတွက်ဖော်ထုတ်နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ စကားမစပ်၊ဒါကြောင့်လည်းအလွန်ထိရောက်သောအသိအာရှအမျိုးသမီးတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်။ ကထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်မသာကြောင်း၊အာရှတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အာရှ။ ကောင်းတစ်လမ်းမှသိလည်းတန်းတူညီမျှအာရှအမျိုးသမီးအတွက်ဂျာမ။ ကြည့်မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်အ စာရင်းဇယားများ(နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဒီဇင်ဘာလ၌)၊သင်ချက်ချင်းမြင်ရသောအများအပြားအာရှအမျိုးသမီးများအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အများအပြားတရုတ်၊ဗီယက်နမ်၊အိန္ဒိယ၊ထိုင်းအမျိုးသမီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအီတလီနိုင်ငံစားထိုး၊အခြားဇာတ်ကောင်၊ဂ်ပန္၊ကိုးရီးယားနှင့်ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသမီး။ ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာတစ်ခုမက၊အပင်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်၊သူတို့ကလည်းသိလှပတဲ့အာရှနှင့်အမျိုးသမီး။ သင်ရုံနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရှိသည်ရှိရာအရပ်၌ရှိကြ၏။ အကူအညီများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ။ သုံးဂူ၊သင်အလျင်အမြန်ရှာတွေ့ဖွဲ့တွေ၊တီနှင့်အခမ်းအဘယ်မှာအများအပြားအာရှအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံသိရသည္။ အထူးခရီးအရက်ဆိုင်နှင့်စားသောက်ဆိုင်သင်ကူညီနိုငျသောအားတွေ့ဆုံသိကျွမ်းရအတူလှပသောအာရှမိန်းကလေးများ။ အရာအုိေကဘား၊ဥပမာအားဖြင့်၊တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှအမျိုးသမီး။ ထို့အပြင်၊အများအပြားရှိပါတယ်ယက်နမ်၊ဂျပန်၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယသို့မဟုတ်တရုတ်အတွက်စားသောက်ဆိုင်ဂျာမ။ ရှိပါတယ်သူမည်သူမဆိုတစ်ဦးအားနည်းသည်အာရှအမျိုးသမီးနှင့်အရန်ဆန္ဒရှိသည်အစားအာရှအစားအစာရပါမည်၊မကြာခဏ၊တခါတလေ၊ပင်လည်အာရှစားသောက်ဆိုင်။ အတွက်စက်ဝိုင်း၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း၊သင်လုပ်နိုင်သည်၊သင်တန်း၏၊အတွေ့အာရှအမျိုးသမီး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ကျေးဇူးတင်ဖို့အွန်လိုင်းလူမှုမီဒီယာအမျိုးမျိုးထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် သို့မဟုတ်ဂူအပေါင်း၊လူမှုရေးကွန်ရက်အလွန်ကောင်းစွာတက်ကိုင် ကောင်းစွာ။ သူတို့အခြေခံအားဖြင့်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုပဲလိုသူမိတ်ဆွေများတက်ကြွစွာမေးမြန်းခန့်လှပတဲ့အာရှနှင့်အာရှတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသိ။ ဒါကြောင့်၊အထွေထွေအတွက်၊များစွာရှိပါသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်ဆုံဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးအအာရှကနေ။ သင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့မြည်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်စတင်အရာတစ်ခုခုလုပ်နေ။ သင်မှတ်ချက်ပေးရန်အပေါ်"အာရှတစ်ဦးတစ်:တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးအာရှကနေသိဖွဲ့စည်းမှု"? ငါအရမ်းပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးဝင်သောနှင့်မှတ်ချက်များနှင့်အသုံးဝင်သော။ ငါခရီးသွားလာတူအရှေ့တောင်အာရှကြောင့်ကျွန်မအမှန်တကယ်ဤကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်သို့မဟုတ်ဖိလစ်ပိုင်:ရှုခင်းသည်အံ့သြဖွယ်နှင့်အဆိုပါလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်မဖွစျနိုငျမှနှိုင်းယှဉ်ပါကအဆိုပါလူနေမှုပုံစံစတဲ့အတွက်အီတလီ။ လိုလျှင်သင်ခရီးသွားလာအတွက်အများကြီးအာရှ၊သင်ဆက်ဆက်အများကြီးသိကြ၏အာရှတစ်ဦးတစ်။ ငါ့အတွေ့အကြုံကပြသများအပြားတစ်ခုတည်းအာရှအမျိုးသမီးထိုင်တွေအများကြီးမှာအမ်ိဳးသားအခုံကြောင့်သူတို့ဖြစ်ယူဆနေကြသည်ရှိသည်အမူအဖြစ်ကောင်းစွာ အချို့အဆင့်ဝင်ငွေ။ အရေအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်အာရှတိုက်၊နှင့်အထူးသဖြင့်အချက်ကိုသူတို့ဖြစ်ခြင်းညှဉ်း။ ညီခွင့်မပြုသည့်အတွက်ဂျာမ။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၊အာရှအမျိုးသမီးများအလွန်အားကောင်းတဲ့"မိသားစု"။ ငါသတိပြုမိကြပြီဒီအတွက်အားလုံးအာရှနိုင်ငံများငါသွားရောက်ကြည့်ရှု။ အများစုကအာရှအမျိုးသမီးများအဘို့ရှာကြသည်သူအကြိုးပွုနိုငျတမိသားစုလုံး။ ငါမတွေ့ ။ လူရိုးရှင်းစွာအကောင်းင့်ကိုႏွင့္၎၏မျက်စိ၌တစ်ဦးတည်းအာရှအမျိုးသမီး။ ၏သင်တန်း၊သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအာရှဘွဲ့နှင့်အာရှချိန်းတွေ့၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မအကြောင်းစဉ်းစားပင်အီတလီနိုင်ငံ၊အများအပြားအဆင်းလှသောအာရှအမျိုးသမီးကြပြီမဟုတ်သေးအပြစ်များသတိပြုမိကြသည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်ရှတီနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအာရှစားသောက်ဆိုင်တွင်ဂျာမနီရှိကြောင်းအမြဲတမ်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်အာရှအမျိုးသမီး။ ပင်အခါအလမ်းအပေါ်၊သင်မကြာခဏဖြည့်ဆည်းလွခါး။ သင်ရုံလိုအပ်ခံရဖို့အသည်းလောက်တော့အဲဒီတက်ကြွစွာမျိုးသမီးများစကားပြောနိုင်လွန်း။ အခြားသူများတည်း။ အများစုကအာရှအမျိုးသမီးများမှာအမျိုးသားများနှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်အင်္ဂလိပ်အသွင်အပြင် ။ ။
ဒါကြောင့်၊၏ဝန်ရှိတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊သူတို့ထဲကအများစုကပြည့်စုံလျက်ရှိနှင့်အတူလိမ်လည်သို့မဟုတ်အာင္လႈိင္အားဖြင့်ကြီးရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှားကိုအသုံးပြု။၏အဖြစ်အများစုကတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဟန်၏အစိတ်အပိုင်းကင္ယာ၏ကွန်ယက် ။။။။ေ အရှာကြသည်လျှင်သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်၊တစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ပဲတစ်စုံတစ်ဦးကကြိုးစားနှင့်ရက်စွဲသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲအကြိမ်အနည်းငယ်သင်တွေ့လိမ့်မည်အတက်လက်မှတ်ထိုးအစီအစဉ်များအတွက်ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖြစ်ဟန်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထွက်အများဆုံးသောက်သုံးနုပညာရှင်နှင့်စစ်မှန်သောမိန်းကလေးများမတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေသို့မဟုတ်လိင်နှင့်အတူပရိုဖိုင်းနှင့်ဝန်များ၏ဓါတ်ပုံများအခမဲ့ရဘူးဒါကြောင့်သင်ပင်မှဆပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ထွက်စစ်ဆေးအားလုံးကိုအပေါ်အမျိုးသမီးရှိပါတယ်။ သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်တွင်ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ရာက္ၾအားလုံးမိန်းကလေးများ၊သင်စီမံခန့်ခွဲဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆက်သွယ်ထို့နောက်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်များအတွက်ပေးဆောင်အကောင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သို့သော်သင့်ကိုတွေ့လျှင်ဘာမှမသင်ထို့နောက်ကျိန်းသေသည်ငွေမပေးပါနဲ့ကိုရရန်အကောင့်တစ်ခုအမည္ဤမိန်းကလေးများ။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဘန် ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမလုပ်ချင်ကြောင်း၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူဤမိန်းကလေးများနှင့်တည်ဆောက်အချို့ဆက်ဆံရေးခင်ရောက်လာတိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်အချက်မှထပ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံကကဲ့သို့ခံစားရ၊သင်ပြီးသားကိုသိရ-သူတို့ကိုအနည်းဆုံးတစ်နည်းနည်း။ ဒါဟာကျိန်းသေမြန်နှုန်းကူညီပေးသည်ရာလမ်းတစ်လျှောက်သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ပါက အခြားတစ်ဖက်တွင်ကိုပဲထယ်ဖြင့်သင်တို့၏လမ်းအဖြစ်အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များအဖြစ်ဖြစ်နိုင်နိုင်ပါသည်အခြားပို့စ်များကိုစစ်ဆေးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အပိုင်းအပေါ်ဆိုက်မှာဘယ်မှာမြင်နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးနေရာလိင်များအတွက်နေကြတယ်ဒါပေမယ့်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုများဖြည့်ဆည်းဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးရှိအလွန်မြင့်မားအကြံပြုဖို့ထွက်စစ်ဆေးအားလုံးကိုအပူ မိန်းကလေးများအပေါ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထိုသူတို့၏အများဆုံးအလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်ဖမ်းပြီးတဲ့နောက်ခင်ပွန်းဖြစ်မည်ကိုအနည်းငယ်လွှမ်းမိုးသောအခါ၊သင်ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာတက်အခမဲ့ အကောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရတဲ့သတင်းစကားများရာနှင့်ချီအထွာများ၏တစ်နေ့သို့မဟုတ်နှစ်ခုအလျှင်မပို။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်ၡမ်ား မျိုးသမီးများအဘို့ရှာကြသည်ကိုနိုင်ငံခြားမိတ်ဖက်အဘို့အချိန်းတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးထွက်စစ်ဆေးဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာဒီနေရာမှာအခမဲ့အဘို့ရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ရှုမည်သည့်အကြောင်းယူ၊ငါတွေ့လျှင်တစ်ကောင်ကမျိုးနှင့်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်၊ကစားသမား၊ကိုဆွဲဆောင် မခက်ခဲသည်။ နောက်တဖန်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏။။။။။ ကျေးဇူးအများကြီးဝေမျှ။ ဒါဟာခက်ခဲဘယ်တော့မှ ချစ်ရန်တစ်။ သင်စစ်ဆေးချင်စေခြင်းငှါ၊ငါ့ဆိုက်တွင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် နှင့်ခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသိမှရသင့်ပတ်လည်၌တကမ္ဘာ။ အမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျား၊ဒေသခံသို့မဟုတ်ခရီးအတွက်၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ပဲတစ်နေ့အဖြစ်အပျက်။ အဘယ်ကြောင့်မ၏အားသာချက်ယူဤအခွင့်အလမ်း? အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအချို့သောအမျိုးအစားအမျိုးသမီးများ-ရုရှားအမျိုးသမီး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာကချိန်းတွေ့ရုရှားအမျိုးသမီးများသောအားဖြင့်ရာအရပ်ကိုကြာအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအကူအညီဖြင့်အင်တာနက်အရင်းအမြစ်များ။ ဒါပေမယ့်ကြိုးစားမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့မည်သို့ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအပေါ်သွားနေတဲ့ခရီးစဉ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအမ်ဳိးအစား၊ဥပမာအားဖြင့်၊အိန္ဒိယ။ တိုင်းအိန္ဒိယ၏အားသာချက်ယူနိုင်အခြေအနေကိုသူသိတွေ့ဆုံရန်၊မိမိအရုရှ။။။။။ ဟုတ်ကဲ့။ ရုရှားမိန်းကလေးများအလွန်အဆင်းလှသောနဲ့ကြိုးစားရှင်။ ယခုကျနော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးပုံမှန်ရုရှားမိန်းကလေး၊ဆက်သွယ်သူမ၏နှင့်အတူစီစဉ်တဲ့အစည်းအဝေး။ ရဲ့စတင်ရန်ကြကုန်အံ့။ လတ်မိန်းကလေးများများအတွက်နှစ်ဦးဘာသာစကား:ဇာတိနှင့်ဗမာ။ သင်သည်ဤဖတ်လျှင်အပိုဒ်တစ်ဘာသာပြန်၊ဂုဏ်ပြုလွှာ။ နောက်တဖန်အ၊အကောင်းတစ်ဦးမိန့်ခွန်းအများကြီးကိုဆိုလို။ မိုက်မဲအမှားတွေနှင့်အတူအမြွက်နှင့်မှန်ကန်အသုံးပြုမှုများ၏စကား၊ရယ်စရာကြည့်ရှု။ သင် သင်ရုံအနိုင်မယူနက်။ ဒါကြောင့်ယူအစိတ်အပိုင်းအတွက်သင်တန်းများသို့မဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်အပေါ်ဘလော့ဂါအကျုအသင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်။ မိန်းကလေးများအနိုင်လာကြဖို့သင်မေးရန်အဘို့အမေးနှင့်အကဒီမှာဖြစ်ကြောင်း၊အကုပ်၊မနှစ်မြို့ဖွယ်၊အလွန်အမင်းကျိုးနွံသောသူကောင်လေးအတွက်စိတ်ဝင်စားပုံ။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့။ ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးမိန်းကလေး၏? သန်၊ပျော်စရာ၊ယောဂနှင့် သင့်အလွယ်တကူမြင်နိုင်မှာပါ။ လည်း၊ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းကိုယူမေးမြန်း၊သူမသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုအုပ်စုအများ၏မိန်းကလေးများဥပမာအားဖြင့်၊လိုအပ်ချက်သင့်လက်ညှိုးမှာလမ္း။ သင်၏လမ်းများ။ ပိုပြီးအချိန်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်မေးခွန်းများကို၊ဟာသပို၊နှင့်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းနိုငျသောတက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူတစ်စိတ်ကူး။ ဒီသင်တို့အဘို့အ၊ဒါကြောင့်သင်ရုံသာမကတစ်။ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်လျှင်။ သင်မြင်သည်အထီးကျန်ဝေမိန်းကလေးစင်လမ်းနှင့်အတူမြေပုံသို့မဟုတ် သူမ၏ဖုန်းပေါ်မှာ။ မကြောက်ပါနဲ့ပြောဆိုရန်မေးမြန်းလျှင်သင်ကူညီနိုင်ဘူး။ ဒါ့အကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်၊ဆင်းရဲသူမိန်းကလေး ကြောက်လန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအစိမ်း။ တွေ့မြင်လျှင်အုပ်စုတစ်စုကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦး ကြောင့်၊သင်ပျောက်ဆုံးနေတယ်၊ပြန်လာပြီးကိုကူညီပါ။ မဆိုအမှု၌၊ပါေစဗ်ာ။ ထို့အပြင်၊တစ်ဦးကိုကျေးဇူးတင်ရုရှားအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ကြီးစွာသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများအတွက်။ သင်သာစီးပွားစွမ်းအားဖြင့်အတူမေတ္တာ၌ကျသွား။ သွားနှင့်အတူကစားကင္ယာမြှား။ ရုရှားမိန်းကလေးများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဆွဲဆောင်မှုများ၊ဥယျာဉ်များနှင့်တင္မည္။ သူတို့စာသားအနေရာတိုင်း။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ဖို့သွားနှင့်ပျမ်းမျှအလတ်အမျိုးသမီး၊"မင်္ဂလာပါ"နှင့်မေးမြန်းလျှင်သူမချစ်တော်မူ၏။ ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေအားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံခြားသား(အလွန်ရိုင်းစိုင်းလျစ်လျူရှုဖို့နိုင်ငံသား)။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အသက်ရှင်သောအတွက်တစ်နေရာအသစ်၊အသစ်တစ်ခုကိုယဉ်ကျေးမှုနှင့်လေထုနှင့်အတူ။ စတင်အသစ်တစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်ပြီးနောက်။ နောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်မသည်သာမေးခွန်းများမေး၊ဒါမှမဟုတ်ရင်အမသာစကားလက်ဆုံသို့လှည့်နိုင်။ တစ်ခုခုပြောလိုပဲ၊"သင်သိလား၊လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ငါခရီးသွားလာဒီအတွက်ကြောင့်၊ဒါဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။"တစ်ဦးကမိန်းကလေးသည်အသည်းအသန်ခရီးသွား၊သူမကသဘာဝကျကျအဆက်သူမ၏ဓါန္ထဲ။ ကြောင်းအရာကိုဖွင့်လျှင်၊သူမကလိုလား အကျင့်မည်မဟုတ်၊ကောင်းစွာ၊သင်စရာမလိုသူအမျိုးသမီးဒါကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါသည်နှင့်ကျိုးနွံကြောင်းပြောဆိုရန်အရာတစ်ခုခုကယ့်ကိုကောင်းတဲ့သူမနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ကံကောင်းပါစေ၊။
။ မတ်လအတွက်၊အနည်းငယ်လလလာကအိန္ဒိယရွာ၏ႏ နှင့်အကျော်ကြားဆုံးသူတစ်ဦးအတွက်ဒေသ။ မှလူအားလုံးအိန္ဒိယကျော်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှလာရောက်အဆိုအရအရွာဘီ-သင်္ချာ ဝေမျှ-:"အချို့ပြောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဤအတောအတွင်း၊နိုင်ငံတကာမီဒီယာအစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ဇာတိ၏သွားဆရာဝန်၊ဆုေတစ်ခုအဖြစ်ဟိန္ဒူနတ်ဦးဆောင်သောအားဖြင့်တစ်ဆင်။ ဖြစ်ချင်တော့၊၊အခြားသောအရာတို့ကိုအကြား၊မစဉ်းစားသည်အသျှင်၏သိပ္ပံ၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်ဟန်အနည်းငယ်ထဲမှာတစ်ဦးပြတ်လပ် အချိန်တွင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေး၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းအသိအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊သူမ၏မိဘများအဆိုအရဆရာဝန်၊ငြင်းခံယူနောက်ထပ်ဆေးပညာစာမေးပွဲ။ နှစ်ဦးစလုံးမိဘများ သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောင်မလုံလောက်ကြောင်း၊မိမိတို့ကလေးကုသထားရမည်၊ပြော ။ ရင္ပဲ၊ဆရာဝန်တစ်ဦးမှာ လယ်တန်းဆေးရုံနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အ မွေးဖွားကူညီရေးအဖွဲ့။ သို့မဟုတ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အနိုင်ပေးသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအားကကလေးရဲ့အခြေအနေ။ ဒါပေမယ့်အဆိုအရသမ၊မိဘများငြင်းဆန်။"ကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့အ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးအခမဲ့များအတွက်၊ဒါပေမဲ့သူတို့လျစ်လျူရှုပါ၊"ဆရာဝန်ကိုးကား ။ အဆိုအရမိဘ၊ထိုကလေးနှင့် င။ မိန်းကလေးအစားရှူရှိုက်ပုံမှန်။ အစဦးတွင်၊ငါအနည်းငယ်"၊"မိန်းကလေးရဲ့ဖခင်တခ်ဳိသာ ၊ကီရှေ့မြောက်ပိုင်းနယူးဒေ။ ဆရာဝန်ကပြောပြီးနောက်အကြောင်းအားလုံးဒီသာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်။ အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်ကိုင်ဖို့ရှိသည်။ လလတဆင့်အစာကျွေးခံတွင်းကို၊အခြားအသုံးပြုမှုကလေးတစ်ဦးအတွက်နို့စို့အလက်မ။ တံတား ၊ဒေသခံဆရာဝန်၊ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ရန်မီဒီယာအပျော်ကျော်ကလေး။"ဒါဟာမမှန်အတွက်ငယ်ငယ်"ဟုခေါ်ဆို-ဆရာ။"သူမသာရှိပါတယ်နှစ်ခုအမျက်နှာများနှင့်အပုံမှန်ဘဝ။ သင်သည်သေတဲ့အခါ၊ဒါကြောင့်ဘုရားသခင့်လိမ့်မည်။ အမြင်တွင် ကျွမ်းကျင်သူများရှိမရှိ၊တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်သင့်လျော်သော၊သာရအားဖြင့်ဆုံးဖြတ် သို့မဟုတ် ။ သို့သော်၊အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအတွက်မည်သည့်ကိစ္စတွင်လိမ့်မည်ရှုပ်ထွေးပြီးအန္တရာယ်များလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အထူးသဖြင့်ကတည်းကယွင်း၏ဒီအမျိုးအစားများကအလွန်ရှားပါးနှင့်၊ထိုကွောငျ့၊အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီသို့မဟုတ်ဒီတော့၊မိန်းကလေးမွေးဖွားခဲ့သည်အတွက်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊အဘယ်သူ၏ဦးခေါင်းရုတ်ဒုတိယဦးခေါင်းခွံ။ ပြီးနောက်ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားရေး၊ကလေးသေဆုံး။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အဘို့ကြာရှည်အိန္ဒိယမိန်းကလေးများအတွက်နှစ်နှစ်နှင့်အတူ၊လေးလက်နက်နှင့်ခြေထောက်ခဲ့ကြကြောင်းစစ်ဆင်ရေးသို့တင်။ မိဘအမည်၊ဟိန္ဒူဘုရားခိ၊အမျိုးသမီးလေးလက်နက်နှင့်အတူ၊သူသည်အတွက်သရုပ်ဖော်ပန်းချီ။ မိန်းကလေးများ၍ပိုလျှံအတွက်၊ခြေထောက်နှင့်လက်နက်ခဲ့ကြမြင်စွာဖယ်ရှား၌သွန်။ ကော်မအွန်လိုင်းမူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်မျိုးပွားခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဘာသာျပန္ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ား
Com per satisfer les nenesal'Índia l'Índia Dating Agency
ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအခမဲ့ ဗီဒီယိုရုရှားချိန်းတွေ့ အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများမိန်းကလေးများ ချစ်ကြည်အြန္လိုင္း ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲနှင့်အတူမိုဘိုင္းဖုန္းဓါတ္ပံု ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးများ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း
© 2021 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ဖိလစ်ပိုင်